Sexual Conspecific Aggressive Response (SCAR) - အမျိုးသမီး ဦး နှောက်တွင်မိခင်သင်ယူမှုနှင့်ပလပ်စတစ်မှုများကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်လိင်စိတ်ဒဏ်ရာပုံစံ - ၂၀၁၆ - သင့် ဦး နှောက်သည်ဆိပ်ပေါ်၌ရှိသည်။
Tracey ဂျေ Shor , Krishna ဟိန္ဒူTobόn , Gina DiFeo , ဒေမေတရိအမ် Durham & ဟန်ယန်အမ် Chang
သိပ္ပံနည်းကျအစီရင်ခံစာများ ၆၊ ပုဒ်မနံပါတ် - ၁၈၉၆၀ (၂၀၁၆)
Doi: 10.1038 / srep18960 ·
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အမျိုးသမီးငယ်ရွယ်လူကြီးသို့အပျိုဖော်ဝင်စကနေပေါ်ထွက်လာအဖြစ်သင်ယူခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများတွင်ဤအတွေ့အကြုံများမော်ဒယ်, ငါတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Conspecific တက်ကြွတုံ့ပြန်မှုအတိုကောက်ထားတဲ့အမာရွတ်, တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်းတစ်ကြွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလိင်-အတွေ့အကြုံရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးနှင့်အတူ 30-မိဘို့နေ့စဉ်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမတံသင်ကနေလှတျအဖြစ်အမာရွတ်အတွေ့အကြုံကိုစဉ်အတွင်းယောက်ျားအမျိုးသမီး၏ anogenital ဒေသခြေရာခံ။
စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း corticosterone ၏ပြင်းအားသိသိသာသာအတွေ့အကြုံစဉ်နှင့်အပြီးတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, အပျိုဖော်ဝင်တစ်လျှောက်လုံးအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးထိတွေ့ခဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးနေစဉ်အတွင်းကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူးမဟုတ်သလိုသူတို့မိခင်ာင်းစဉ်အတွင်းမိခင်အပြုအမူတွေကိုဖော်ပြကောင်းစွာလေ့လာသင်ယူခဲ့ပေ။ အရွယ်ရောက်သူအထီးထိတွေ့ခဲ့အများစုမှာအမျိုးသမီး 17 ကာလ၏သင်တန်းကျော်သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့ဂရုစိုက်ဖို့သင်ယူခဲ့ပါဘူး။ မိခင်အပြုအမူတွေကိုဖော်ပြခဲ့သူတွေကိုရက်သတ္တပတ်အတွင်းအာရုံခံသို့ခွဲခြားမယ်လို့အရှိဆုံးအရာပိုဆဲလ်ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်မိခင်အပြုအမူတွေကိုဖော်ပြမအမျိုးသမီးသူတို့ရဲ့ hippocampus အတွက်နည်းပါးလာအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆဲလ်ထိန်းသိမ်းထား။ အတူတူကဤဒေတာကိုအပျိုဖော်ဝင်နှင့်လူငယ်လူကြီးစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးဦးနှောက်အဘို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာများ၏အလားအလာအကျိုးဆက်များကိုလေ့လာများအတွက်အသုံးဝင်သောဓာတ်ခွဲခန်းမော်ဒယ်အဖြစ်အမာရွတ်ထောက်ခံပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေသုံးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မိမိတို့၏တစ်သက်တာအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအချို့မျိုးတွေ့ကြုံခံစား1နှင့်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များအဓမ္မပြုကျင့်မှု, ကြိုးစားခဲ့မုဒိမ်းမှု, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး၏သားကောင်များဖြစ်အများကြီးပိုပြီးယေဘုယျလူဦးရေထက်များမှာ2။ တက္ကသိုလ်အများစုပထမနှစ်နှင့် sophomores အတွက်ဖြစ်ပေါ်စဉ်နီးပါးတဦးတည်းသီးအလေးဘွဲ့ကြိုအမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစား3။ လမ်းမများပေါ်တွင်နေထိုင်စဉ်ထိုမှတပါး, စိတ်ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ, ဆင်းရဲအိုးအိမ်မဲ့နေသောအထူးသဖြင့်သူများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများမှအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်များမှာ4,5။ မည်သို့ပင်, စိုးရိမ်စိတ်ကိုထိခိုက်လာသောအခါသို့မဟုတ်ရှိရာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုဘဝအတှေ့အကွုံအမြားဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်ထိခိုက်တဦးဖြစ်ပါသည်, မကြာခဏအနုတ်လက္ခဏာပေါ်ပေါက်ရေးမှပံ့ပိုး၏, လူကြီးအတွက်သင်ယူမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက်လိုငွေပြမှု6,7,8။ အမျိုးသမီးများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာအကြားငြင်းကွန်နက်ရှင်နေသော်လည်းကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်နှင့်ဆက်စပ်အတွေ့အကြုံများအမျိုးသမီးဦးနှောက်ပွောငျးလဲဘယ်လိုနည်းနည်းကိုငါသိ၏။ အမျိုးသမီးအတွက်အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံခံ function ကိုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာများ၏အကျိုးဆက်များကိုလေ့လာဘို့အဘယ်သူမျှမထူထောင်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်လည်းမရှိသောကြောင့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအများစုဟာမော်ဒယ်များထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုမှထိတွေ့မှုအပေါ်အားကိုး, သေချာပေါက်ကြောင်းအစစ်အမှန်ဘဝမှာနေတဲ့လူငယ်အမျိုးသမီးတွေအတွေ့အကြုံကိုဖိအားများအမျိုးမျိုးနှင့်အမျိုးအစားများရောင်ပြန်ဟပ်မထားတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလှုပ်ခြင်း, ရေကူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေဤနှင့်အလားတူမော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. ကျနော်တို့အမျိုးသမီးကြွက်အထီးကြွက်ဓာတ်ခွဲခန်းဖိအားလုပ်ပေးထက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားကိုတုံ့ပြန်ကြောင်းညွှန်ပြမြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများထုတ်ဝေခဲ့ကြ9။ ဥပမာ, ဂန္ထဝင်-အေးစက် anticipatory တုံ့ပြန်မှုအသင်းသင်ယူမှုအထီးကြွက်များတွင်ဓာတ်ခွဲခန်းဖိအားထိတွေ့ပြီးနောက်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အမျိုးသမီးအတွက်စိတ်မချရသော10,11။ အမျိုးသမီးတွင်ဤသင်ယူခြင်းလိုငွေပြမှုဟာ hippocampus အတွက် Synaptic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆအတွက်လျှောက်လျော့နည်းခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ကြသည်။ စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ်အမျိုးသမီးအတွက်သင်ယူမှုလိုငွေပြမှုဟာ prefrontal cortex အများစုမှတ်သားလောက်သည့် hippocampus, amygdala နှင့် prelimbic ဒေသ, ဦးနှောက်ဒေသအတော်များများအတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူတည်12,13.
ဒါဟာမကြာခဏဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုသင်ယူမှုနှင့်အာရုံခံ function ကို၏သက်ရောက်မှုစိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များကိုတွေ့ကြုံခံစားသောမိန်းမတို့အတွက်ပေါ်ပေါက်နိုင်ကြောင်းအပြောင်းအလဲများကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်ဟုယူဆနေသည်။ မျိုးစိတ်များစွာ၏အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းမဦးမှမကြာခဏဖြစ်ပျက်တစ်ခုမှာအတွေ့အကြုံကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ဖြစ်ပြီး, မှတ်ချက်ချအဖြစ်, အမျိုးသမီးများတွင်ဤဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံများစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများအဖြစ်သင်ယူနှင့်အာရုံစူးစိုက်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတားဆီးသောအတိတ်အကြောင်းကိုစိတ်အာရုံထွေပြားအကြံအစည်များနှင့်မွေးမြူရေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ တောင်မှစိတ်ရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပေါ်မသွားဘူးသောမိန်းမတို့အဘို့, လိင်-စိတ်ထိခိုက်အတွေ့အကြုံများယူဆရသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံခံလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အပြောင်းအလဲများမှတဆင့်သူတို့၏ဘဝအပေါ်တစ်ဦးတည်မြဲစှဲထားခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်အပြည့်အဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်စဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးဦးနှောက်အတွင်း activated ဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောအာရုံခံခြင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာယန္တရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းမော်ဒယ်ဖွံ့ဖြိုးရပါမည်။ ဒီလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကျနော်တို့လိင် Conspecific တက်ကြွတုံ့ပြန်မှု (အမာရွတ်) အဖြစ်လတံ့ဟုလူသိများတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အမာရွတ်မော်ဒယ်မှာတော့ ဒီအမျိုးသမီးလိင်ရန်လိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားပေါင်းကြုံတွေ့ရဆုံးများပါတယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမငယ်ရွယ်လူကြီးသို့အပျိုဖော်ဝင်စကနေ transitions အဖြစ်ကျနော်တို့ကအမျိုးသမီးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ Wအီးလည်းလက်တွေ့ကျသောအကြောင်းပြချက်အဘို့ဤအချိန်ကာလကို ရွေးချယ်. , ယောနိတူးမြောင်းအပြည့်အဝပွင့်လင်းမဟုတ်ပါဘူးနှင့် / သို့မဟုတ် estrous သံသရာအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးမဟုတ်ပါဘူးကြောင့် pubescent အမျိုးသမီးကြွက်သုတ်ရည်ထိနှင့် / သို့မဟုတ်မျိုးပွား၏အပြည့်အဝနိုင်စွမ်းသည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့်, လူကြီးအထီးနှင့်အတူ interaction ကသားစဉ်မြေးဆက်ကိုထုတ်လုပ်မည်မဟုတ်။ လူကြီးအထီးနှင့်အတူတစ်ဝတ္ထုတှေ့ဆုံတုမှတစ်ဦး pubescent အမျိုးသမီး Sprague Dawley ကြွက် (postnatal နေ့က 35) မိမိတို့၏နေအိမ်အိတ်များ၏တစ်ခုခုကနေမတူညီတဲ့တစ်ဦးအခြေအနေတွင် 30-မိများအတွက်လိင်-အတွေ့အကြုံရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံကျူးကျော်များနှင့်ဧည့်ခံဖို့နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူဂိုးသွင်းနိုင်ရန်အတွက်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအရွယ်ရောက်ယောက်ျားကျူးကျော်များအတွက်မရွေးပေမယ့်အစားတစ်ဦးထူထောင်ကိုလိုနီများထံမှလိင်-အတွေ့အကြုံရှိမြိုးဆကျခဲ့ကြသည်မခံခဲ့ရပါ။ အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်စဉ်အတွင်းထိုလူငယ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်တစ်ကြိမ်, အပျိုဖော်ဝင်တစ်လျှောက်လုံးသည်အခြားနေ့က alternated ။
အောက်ပါစမ်းသပ်ချက်တှငျကြှနျုပျတို့သူတို့အား interaction ကများ၏ interaction ကနှင့်အစီရင်ခံစာအကျိုးဆက်များစဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောအပြုအမူတွေကိုဖော်ပြရန်။ ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံအမျိုးသမီးကြွက်များအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင်းတည်ထောင်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်ကြောင့်ဤကနဦးလေ့လာမှုများအဘို့, ကျနော်တို့ဇီဝကမ္မစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ယင်း၏မြင့်အဆိုပါ hypothalamic-pituitary adrenal (HPA) ဝင်ရိုး, နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်အတွက်မူလတန်းစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု activation ညွှန်ပြကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း၏ပြင်းအား, corticosterone တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့လာမယ့်သင်ကြားမှုအပေါ်အမာရွတ်အတှေ့အကွုံမြား၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်. အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစံဓာတ်ခွဲခန်းဖိအားထိတွေ့မှု, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးအတွက်သင်ယူမှု၏ဤအမျိုးအစား disrupts ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ဂန္ထဝင်-အေးစက် eyeblink တုံ့ပြန်မှုကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ သင်ယူမှု၏ဤအမျိုးအစားထိုနည်းတူလူကြီးအထီးမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့မှာလည်းဒီတာဝန်ကို ရွေးချယ်.14။ အမာရွတ်အတွေ့အကြုံကိုဒီတုန့်ပြန်၏သင်ယူမှုနှောင့်အယှက်မှဖြစ်လျှင်ထိုကွောငျ့, တဦးတည်းထီးနှင့်အတူလူမှုရေးအပြန်အလှန်တစ်ဦးထက်ပိုသောပုံမှန်ဓာတ်ခွဲခန်းဖိအားအလားတူတုံ့ပြန်မှု induces ကောက်ချက်ချနိုင် (စိတ်ဖိစီးမှု, အမြီးဆွရကေူး) နှင့်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုလူကြီးသို့အပျိုဖော်ဝင်စကနေချဲ့ထွင်နိုင်မ ။ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုအပိုဆောင်းထားတှငျကြှနျုပျတို့အမျိုးသမီးအတွက်မိခင်အပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါလူမှုရေးအပြန်အလှန်၏အကျိုးဆက်များကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ မိခင်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့အပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် "သင်ယူခြင်း" အမျိုးသမီးဆည်းပူးသောအရေးအပါဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပွဲတစ်ပွဲအရှိဆုံးအချို့လျှင်မဟုတ်ပါဘူး။ တဖန်ရည်မှန်းချက်မိန်းမတို့အဘို့အဓိပ္ပါယ်ရှိသောရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်းအများဆုံးမျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှု impact ကြောင့်အပြုအမူတွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိသည်အလားအလာရလဒ်များအကဲဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
နောက်ဆုံးမှီခိုအတိုင်းအတာအဖြစ်ကျနော်တို့ hippocampus အတွက် neurogenesis ပေါ်တွင်အမာရွတ်အတှေ့အကွုံအလားအလာအပေါ်သက်ရောက်မှုများထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောနေ့တိုင်းနီးပါးနှစ်ကြိမ်အများအပြားအဖြစ်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း - အ hippocampus ဘဝတစ်လျှောက်လုံး neuron အသစ်တွေထုတ်ပေး15။ သစ်တစ်ခုသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပေါ်မဟုတ်လျှင်ထိုအ neuron အသစ်တွေထဲကအတော်များများထုတ်ပေးလျက်ရှိတဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသေဆုံး16,17။ neuron အသစ်တွေစောင့်ရှောက်သောသင်ယူမှုအမျိုးအစားများအသက်ရှင်လျက်သဲလွန်စအေးစက်, Spatial အညွှန်းသင်ယူမှုနှင့်မော်တာကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူမှုပါဝင်သည်17,18,19။ အပျိုဖော်ဝင်ထဲမှာဆဲလ်ရှင်သန်မှုအပေါ်သင်ယူခြင်း၏သက်ရောက်မှုလူကြီးအတွက်သူတို့အားဆင်တူပေမယ်ဤမျှလောက်များစွာသောပိုပြီးဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်ပြီးကြောင့်, ဦးနှောက်သမာဓိရှိဘို့သင်ယူခြင်း (သို့မဟုတ်သင်ယူမဟုတ်) ၏အကျိုးဆက်များကိုအထူးသဖြင့်လေးနက်ဖြစ်ကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်ချက်တှငျကြှနျုပျတို့မိခင်အပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါအမာရွတ်များ၏သက်ရောက်မှုများ hippocampus အတွက်အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆဲလ်ရှင်သန်မှုနှောင့်အယှက်မယ်လို့တွေးဆ။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်နောက်ဆုံးမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲတှေ့ဆုံကြောင့်ထိခိုက်သောအမျိုးသမီးဦးနှောက်အတွက်ရလဒ်အတိုင်းအရှည်ကိုမြဲမြံစေဖို့ပဲ။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို Sprague-Dawley ကြွက်စိတ်ပညာ၏ Departmet အတွက် Rutgers University ကရပ်ကြီးခဲ့သည်။ နှစ်ဆယ်ရှစ်ရက်အတွင်းမွေးဖွားပြီးနောက်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် (2 စင်တီမီတာရှည်လျား3စင်တီမီတာကျယ်ပြန့်2စင်တီမီတာမြင့်သောအားဖြင့်အားဖြင့်) စံပလပ်စတစ် shoebox စတိုင်လှောင်အိမ်ထဲမှာနို့နှင့်သျော 4-44.5 ယောက်ျား၏ goups နှင့် 21.59-23.32 အမျိုးသမီးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမိခင်လေ့လာမှုမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးတည်းသျောခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များအစားအစာနှင့်ရေမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့ ကြော်ငြာ libitum နှင့် 12 အပေါ်ထိန်းသိမ်းထား: 12 နာရီ Light-မှောင်မိုက်သံသရာ; အလင်းကိုသံသရာ 7am မှာစတင်ခဲ့ပြီး 7pm မှာအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အားလုံးကိုင်တွယ်နှင့်စမ်းသပ်ဆဲထိန်းသိမ်းရေးအတွက် diurnal သံသရာ၏အလင်းသောအဘို့ကိုထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်ချက်လူ့စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်အပေါ် PHC ကိုပေါ်လစီများကသတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့အပြည့်အဝလိုက်နာနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Rutgers University ကတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့််ဆောင်မှုများကော်မတီအားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးအတည်ပြုခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု 1: အပြုအမူတွေအမာရွတ်ကာလအတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ဘာလဲ?
အထီးမြိုးဆကျဟောင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 35-120 လက်ထက် မှစ. အသက်အရွယ်အတွက်ကွဲပြားသော်လည်းအဆိုပါ pubescent အမျိုးသမီး, Post-Natal နေ့က (PND) 160 အခါအမာရွတ်ထိတွေ့မှုစတင်ခဲ့သည်။ ယောက်ျား 120-220-ဂရမ်အကြားချိန်သော်လည်းဒီအသက်အပိုင်းအခြားထဲမှာအမျိုးသမီး, 400-700-ဂရမ်အကြားချိန်တွယ်။ စမ်းသပ်ကိုင်တွယ်စဉ်အတွင်းတဦးတည်း pubescent အမျိုးသမီးကြွက် (ဎ = 10) 30-မိဘို့အရွယ်ရောက်လိင်-အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်နဲ့ဝတ္ထုလှောင်အိမ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ တွဲဖက်မှုအတွင်းအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦး pubescent အမျိုးသမီးကြွက် (ဎ = 10) တို့အကြားအလားတူတွဲဖက်မှုနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးကြွက်စဉ်အတွင်းအပြုအမူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအခြေအနေမခွဲခြားဘဲတစ်ဦးချင်းစီစွမ်း, တူညီတဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါထိတွေ့မှုရှစ်ရက်ဆက်တိုက်နေ့တိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ pubescent အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းစီတစ်နေ့တာ alternated ခဲ့ကြသည်နှစ်ခုအရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးထိတွေ့ခဲ့သည်။ အားလုံး interaction ကဗီဒီယိုအားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်နှင့်အပြုအမူနှစ်ခုလွတ်လပ်သောစမ်းသပ်နေဖြင့်လက်သွင်းယူခဲ့ကြသည်။
အလွန်နည်းပါးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ intromissions ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထို့ကြောင့်, ဒေတာကဒီမှာတင်ပြကြသည်မဟုတ်။ 1) anogenital Track, 2) တံသင်, 3) ထွက်ပြေးသောအခါအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်ကျနော်တို့သုံးအပြုအမူတွေကိုရေတွက်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ သူမလှောင်အိမ်ထဲမှာလှည့်ပတ်ပြေးအဖြစ်ယူဆရအမျိုးသမီး၏ anogenital ဒေသ sniffing စဉ်တစ်ခု anogenital ခြေရာခံဖြစ်ရပ်စဉ်အတွင်း, အထီးခြေရာခံ။ အထီး၏နှာခေါင်းသည်အဆက်မပြတ်ပမာဏ (> 1-sec) အနေဖြင့်အမျိုးသမီး၏ anogenital ဒေသကိုထိမိခြင်းသို့မဟုတ်ထိမိခြင်းဖြစ်သောအခါ၊ ဘောပင်တစ်ချောင်းတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသောအထီးသည်များသောအားဖြင့်သူမအပေါ်တွင်ထိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်သူမ၏နောက်ကျောကိုလှည့်ခြင်းနှင့်သူမ၏နှိမ့်ချရန်သူ၏လက်ဖ ၀ ါးများအားဖြင့်အမျိုးသမီးကိုထိရောက်စွာတားဆီးလိမ့်မည်။ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သည့်အပြုအမူတွင်မိန်းမသည်နောက်ဘက်ခြေထောက်များပေါ်ထိုင်ကာလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားနေသကဲ့သို့လှောင်အိမ်ထိပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဤအပြုအမူ (၃) ခုသည်မိနစ် (၃၀) မိနစ်တွေ့ဆုံမှုတွင် (၁၀) မိနစ်အတွင်းရေတွက်ခဲ့သည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤအပြုအမူများကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီး (အမျိုးသမီး / မိန်းမ) နှင့်တွဲဖက်သည့်အခါ pubescent အမျိုးသမီးဖော်ပြသည့်အလားတူအပြုအမူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးအမာရွတ်ထိတွေ့မှုအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးများကထုတ်ဖော်ပြောဆို anogenital Track ၏နံပါတ်များကို (အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး / pubescent အမျိုးသမီး; အမာရွတ်) တစ်ဦး pubescent အမျိုးသမီး (အမျိုးသမီး / အမျိုးသမီး) အုပ်စုတစ်စု (အတူတွဲထားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးကြွက်ဖော်ပြအလားတူအပြုအမူနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြt(18) = 6.07; p <0.001; သင်္ဘောသဖန်း။ 1A) ။ အဆိုပါ pubescent အမျိုးသမီးများကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထွက်ပေါက်အပြုအမူတွေ၏နံပါတ်များအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးထက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးနှင့်အတူအပြန်အလှန် (ကာလအတွင်းအရေအတွက်လည်း သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြt(18) = 6.94; p <0.001; သင်္ဘောသဖန်း။ 1B) ။ အဆိုပါ pubescent အမျိုးသမီးတစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီး (နှင့်အတူအပြန်အလှန်သည့်အခါထက်တစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးနှင့်အတူအပြန်အလှန်အခါတံသင်၏နံပါတ်များကိုအရေအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြt(18) = 5.77, p <0.001; သင်္ဘောသဖန်း။ 1C) ။ ဤရွေ့ကားအတူတူပင်အပြုအမူတွေဟာ 8 စဉ်အတွင်းဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်th conspecific ထိတွေ့မှု၏ဆက်တိုက်နေ့ဖြစ်၏။ ပထမဦးဆုံးထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းအဖြစ်, anogenital Track ၏နံပါတ်များကိုခြီးမွှောကျခဲ့သညျ (t(18) = 10.51; p <0.001; သင်္ဘောသဖန်း။ 1D), ထွက်ပေါက်အပြုအမူတွေ (ခဲ့ကြသည်အဖြစ်t(18) = 6.09; p <0.001; သင်္ဘောသဖန်း။ 1E), နှင့်တံသင်၏နံပါတ်များကို (t(18) = 5.57; p <0.001; သင်္ဘောသဖန်း။ 1F) ။ ဤအပြုအမူ၏နံပါတ်များကိုပထမနှင့်အh္ဌမထိတွေ့မှုများ (p> 0.05) အကြားမပြောင်းလဲပါ။ ဤရလဒ်သည်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အပြုအမူများသည်လူနှစ် ဦး ကြားလူမှုဆက်ဆံရေးအဆက်အဆံနှင့်အတူလေ့မပြုခဲ့ပါ။
ပုံ 1: အမာရွတ်ထိတွေ့မှု၏အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များ။
(A) ပထမအမာရွတ်ထိတွေ့စဉ်အတွင်း anogenital ကို sniff ၏နံပါတ် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး / pubescent အမျိုးသမီး) ကိုအမာရွတ်အတွက်အခြားအမျိုးသမီး (အမျိုးသမီး / အမျိုးသမီး) နဲ့တွဲအမျိုးသမီးထက်အဖွဲ့ကိုသိသိသာသာကြီး။ (Bအရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲသည့်အခါထက်တစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးနှင့်အတူတွဲသည့်အခါ) ပထမထိတွေ့စဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးထွက်ပေါက်အပြုအမူတွေ၏ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ (Cက) အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးလုပ်ခဲ့တယ်ထက်ပိုဆ pubescent အမျိုးသမီးချ Taskbar မှာအရင်ကမရှိသေးတဲ့။ (D-F) ဒီအမူအကျင့်ရလဒ်များအဋ္ဌမထိတွေ့ကာလအတွင်းအလားတူခဲ့ကြသည်။ အမာရွတ်အုပ်စုတစ်စုတစ် pubescent တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲသောအခါအလားတူအပြုအမူနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာပိုပြီးအပြုအမူတွေနဲ့တံသင်လွတ်မြောက်ရန်ထုတ်လွှတ်ပိုပြီး anogenital ကို sniff, ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု 2: အမာရွတ်ထိတွေ့ corticosterone တိုးမြှင့်ပါသလား?
တစ်စက္ကန့်စမ်းသပ်မှုမှာတော့ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုအချိန်မှတ်မှာစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း corticosterone ၏ပြင်းအားပေါ်အမာရွတ်ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့အနေနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမှထိတွေ့မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှလူကြီးအထီးဖို့ထိတွေ့ပြီးနောက် pubescent အမျိုးသမီး 30-မိအတွင်းဖြန့်ချိ corticosterone ၏ပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ 6-မိနှင့်တစ်ခုတည်းထိတွေ့အောက်ပါအဘို့အ Pubescent အမျိုးသမီးတစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမျိုးဆက်များ (ဎ = 5) တစ်ခုခုကိုထိတွေ့ခဲ့သည်ဒါမှမဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီး (ဎ = 60, PND 120-30), ပင်စည်, အသွေး 30-မိနောက်ပိုင်းတွင်ကောက်ယူခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များ pentobarbital intraperitoneal ဆေးထိုးခြင်းနှင့်စည်အသွေးတော်၏တစ်ဦးသေစေလောက်ထိုးစုဆောင်းခဲ့သည်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ အသွေးသည် heparin ပြွန် (bd Biosciences, Franklin အေိုငျမြား, NJ), 2500-မိဘို့ 20 RPM မှာ centrifuged နှင့် -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားသို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ Corticosterone immunoassay ထုတ်လုပ်သူရဲ့ protocol ကို (Corticosterone EIA ကို Kit, Arbore assay, အမ်း Arbore, MI) အရဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ သီးခြားအုပ်စုများအတွက်တစ်ဦး pubescent အမျိုးသမီး 30-မိများအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးထိတွေ့ (ဎ = 8) သို့မဟုတ် 30-မိများအတွက်ဝတ္ထုလှောင်အိမ်ထဲမှာတစ်ဦးတည်းထားရှိခဲ့ပါသည် (ဎ = 7) ခံခဲ့ရသည်။ အထီးတစ်ဦးကြွက်များအတွက်အနည်းငယ်စိတ်ဖိစီးမှုသောဝတ္ထုအခြေအနေတွင်မှတုန့်ပြန်လွတ်မြောက်လာသည့်ပမာဏ, နှိုင်းယှဉ်ခဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ထိတွေ့သည့် pubescent အမျိုးသမီး၏သွေးထဲတွင် corticosterone များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု။ အဆိုပါအပြန်အလှန်စဲခဲ့သောနှစ်နာရီပြီးနောက်, အမျိုးသမီးအထက်တွင်အဖြစ် pentobarbital တစ်ဦးသေစေလောက်ထိုးပေးခဲ့နှင့်သွေး corticosterone ပြင်းအား၏ radioimmunoassay ဘို့ကောက်ယူခဲ့သည်။
တစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံကိုစဉ်အတွင်း adrenal ဂလင်းကနေဖြန့်ချိသောကဖိစီးမှုဟော်မုန်း corticosterone ၏မြင့်မားသောပြင်းအားများကညွှန်ပြအဖြစ်အမာရွတ်အတွေ့အကြုံ, အမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမတစ်ဦးဝတ္ထုဆက်တင် (ရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးနှင့်အတူထားရှိသောအခါဖြန့်ချိခဲ့ကြသောပြင်းအားနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာပြင်းအားလူကြီးအထီးမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့ပြီးနောက် pubescent အမျိုးသမီး 30-မိအတွက်ခြီးမွှောကျခဲ့သညျt(13) = 2.59; p <0.05; သင်္ဘောသဖန်း။ 2A) ။ 30-မိများအတွက်ဝတ္ထုအခြေအနေတွင်တယောက်တည်းကျန်ရစ်သောနှင့်အိမ်လှောင်အိမ်မှပြန်လာသောတစ် pubescent အမျိုးသမီးအတွက်ပြင်းအားနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသီးခြားစမ်းသပ်မှုများတွင် 30-မိများအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးထိတွေ့ pubescent အမျိုးသမီးအတွက် corticosterone ပြင်းအားနှစ်နာရီအကြာတွင်ခြီးမွှောကျခဲ့သညျ (t(9) = 3.07, p <0.05; သင်္ဘောသဖန်း။ 2B) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်အတူလူမှုရေးအပြန်အလှန်အနည်းဆုံး pubescent အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်, တူညီတဲ့လိင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ထက်ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဝတ္ထုအခြေအနေတွင်တယောက်တည်းကျန်ရစ်သောခံထက်ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပုံ 2: အမာရွတ်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းတိုးပွါးနှင့်သင်ယူမှု disrupts ။
(A) Corticosterone ပြင်းအားသိသိသာသာတစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲခဲ့ pubescent အမျိုးသမီးအတွက်ပြင်းအားနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးထိတွေ့ခဲ့သည်သုံးဆယ်မိနစ်အကြာတွင် pubescent အမျိုးသမီးအတွက်တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ (B) ပြင်းအားဝတ္ထုအခြေအနေတွင်၌ထားကြ၏ကြောင်း pubescent အမျိုးသမီးအတွက်ပြင်းအားနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာလူကြီးအထီးနှင့်အတူတွဲခဲ့ pubescent အမျိုးသမီးအတွက်နှစ်နာရီအကြာတွင်ခြီးမွှောကျခဲ့သညျ။ (C) ကိုဂန္ထဝင်အေးစက် eyeblink တုံ့ပြန်မှုအရွယ်ရောက်သူအထီးထိတွေ့အမျိုးသမီးအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်သင်ယူခြင်း။ လူကြီးအထီး (အဘယ်သူမျှမအမာရွတ်) ထိတွေ့မဟုတ်ခဲ့အမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသဲလွန်စအေးစက်နေစဉ်အတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသူများအမျိုးသမီးအတွက် (အမာရွတ်) သို့လျှော့ချခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေက dotted line ကိုအခြေအနေများကိုတုန့်ပြန်၏အောင်မြင်သောသင်ယူမှုတစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်သော 60% သင်ယူမှုစံနှုန်းဖော်ပြသည်။
စမ်းသပ်မှု 3: အမာရွတ်ကတော့ pubescent အမျိုးသမီးအတွက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုနှောင့်အယှက်ပါသလား?
တတိယစမ်းသပ်မှုမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးသဲလွန်စလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသုံးပြီးဂန္ထဝင်-အေးစက် eyeblink တုံ့ပြန်မှုသင်ယူခြင်းအပေါ်အမာရွတ်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမျက်ခွံကနေ Electromyography (EMG) လှုပ်ရှားမှုကြွက်သားမှတစ်ဆင့် eyeblink လှုပ်ရှားမှုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ လျှပ်ကာခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (ယူအက်စ်) ကယ်နှုတ်တော်မူရန်အမျက်ခွံတစ်ဝိုက်ကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ ခွဲစိတ်စဉ်အတွင်းကြွက်တစ်ဦး isoflurane မွှန်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းခဲ့သည့်ဆိုဒီယမ် pentobarbital (35mg / ကီလိုဂရမ်), နှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ လျှပ်နှစျယောကျအားလုံး (အတွင်းကာကွယ်ပေးနိုင်သံမဏိဝါယာကြိုး 0.005 ။ ) တစ်ဦးဦးခေါင်းဇာတ်စင်တွဲနှင့်အထက်မျက်ခွံ (orbicularis occuli ကြွက်သား) မှတဆင့်ထဲထညျ့ခဲ့သညျ။ wire ကိုလှည့်ပတ် insulator တွင်လည်းကြွက်သားတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီလျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုအပိုင်းကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဦးခေါင်းဇာတ်စင်လေး screw နှစ်ခုသုံးပြီး positioned နှင့်ပါးစပ်တွင်း acrylic နှင့်အတူလုံခြုံခဲ့ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ကြွက်နွေးထားရှိမည်ခဲ့ကြသည်များနှင့်လေ့လာရေးအောက်မှာမေ့ဆေးကနေပြန်လည်နာလန်ထူအထိပါပဲ။ ကြွက်တစ်ဦးနှုတ်အုပ်ချုပ် 32mg / ကီလိုဂရမ်ထိုး, နှင့်ကြိုတင်လေ့ကျင့်ရေးမှခွင့်ပြုခဲ့အနည်းဆုံး 112 ရက်ပေါင်းပြန်လည်နာလန်ထူမှာခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ကလေးများ Acetaminophen (conc ။ 2mg / ml) ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။
PND 35, အမျိုးသမီး pubescent ကြွက်မှာ (ဎ = 6) နေ့ရက်တိုင်း 30-မိဘို့အရွယ်ရောက်လိင်-အတွေ့အကြုံရှိအထီးထိတွေ့သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းထားရှိခဲ့ပါသည် (ဎ = 6) 30-မိဘို့လှောင်အိမ်ထဲမှာ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ပဉ္စမအမာရွတ်ထိတွေ့ပြီးနောက် eyeblink လျှပ်ကူးပစ္စည်းခွဲစိတ်မှု, ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူ၏နှစ်ရက်ပြီးနောက်, အမျိုးသမီးတခါထပ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးနေ့ရက်တိုင်း (အမာရွတ်) ထိတွေ့ခဲ့ကြပါသို့မဟုတ်အထီး (အဘယ်သူမျှမအမာရွတ်) မရှိဘဲလှောင်အိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းကျန်ရစ်သော။ အဋ္ဌမနေ့တွင်, အသီးအသီးအမျိုးသမီး 30-မိများအတွက်အထီးထိတွေ့ခဲ့သည်ထို့နောက်အမာရွတ်ထိတွေ့မှုကနေဖယ်ရှားနှင့်အေးစက်အခန်းလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါလျှပ်မှတ်တမ်းတင်ပစ္စည်းကိရိယာများမှချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသူတို့ကတစျနာရီများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးယန္တရားမှ acclimated ခဲ့ကြသည်။ နက်ဖြန်နေ့၌စီအမျိုးသမီးအဖြစ်မှီ, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးထိတွေ့, ပြီးတော့သဲလွန်စအေးစက်၏ 200 စမ်းသပ်မှုတွေနှင့်အတူလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသင်တန်း 800 စမ်းသပ်မှုတွေ၏စုစုပေါင်းအဘို့, လေးရက်ကြာထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်။
တစ်ဦးကသဲလွန်စအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတိရစ္ဆာန်အဖြူရောင်ဆူညံသံအေးစက်လှုံ့ဆော်မှု (CS) နှင့် periorbital မျက်ခွံဆွတစ်ခုခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (ယူအက်စ်) အကြားယာယီကြားဆက်ဆံရေးသင်ယူဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့ကာလအတွင်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဖြူရောင်ဆူညံသံ, 80 ms များအတွက် 250 dB မှာကယ်နှုတ်တော်မူ၏တစ် 500 ms သဲလွန်စကြားကာလများကကွဲကွာနှင့် 0.5 ms များအတွက် 100 Ma မှာမျက်ခွံ၏ဆွနှင့်အတူအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ တွေ့ရစဉ်လှုပ်ရှားမှုသပ္ပါယ် eyeblink တုံ့ပြန်မှုကို (သဲလွန်စကြားကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောသူတို့ကိုအ) ၏ရာခိုင်နှုန်းအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ (အမေရိကန်ဖယ်ထုတ်ပြီး) တစ်ဦးချင်းစီတရားခွင်တစ်လျှောက်လုံးမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ CS တုံ့ပြန် Eyeblinks သည့်အခြေခံတွေ့ရစဉ်တုံ့ပြန်မှုကနေပြင်းအားနှင့်ကြာချိန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုအဖြစ်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ရစဉ်လှုပ်ရှားမှု 10-ms, 0.3-MV ကိုကျော်လွန်လျက်, အခြေခံတွေ့ရစဉ်တုံ့ပြန်မှု prestimulus ထက်ပိုမှာအနည်းဆုံးသုံးစံသွေဖီမှု (SD) ခဲ့လျှင်တစ်ခု eyeblink ရေတွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 500-ms သဲလွန်စကြားကာလအတွင်းမှာနှင့်အမေရိကန်မတိုင်မီဖြစ်ပွားခဲ့သောသူတို့တုံ့ပြန်မှု conditional တုံ့ပြန်မှု (CRS) ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ မှတ်ချက်ချကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောကြွက် 200 ရက်ဆက်တိုက်နေ့တိုင်း4စမ်းသပ်မှုတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ လေးရက်၏သင်တန်းကျော်တစုံတယောက်သောသူသည် session တစ်ခုအတွက်တုံ့ပြန်အေးစက်ကအနည်းဆုံး 60% ထုတ်လွှတ်ကြောင်းတိရစ္ဆာန်များအတွက် CR သင်ယူကြမှစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
ANOVA အဆိုပါမှီခိုအစီအမံအဖြစ် 100 စမ်းသပ်မှုတွေ၏ရှစ်လုပ်ကွက်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်သုံးပြီးကောက်ယူခဲ့သည်တစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလေ့ကျင့်ရေး၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက် [အလွန်အမင်းသိသာခဲ့သည်F (7,70) = 7.89, p <0.001], CRs ၏နံပါတ်လုပ်ကွက်ကျော်တိုးလာထို့ကြောင့်သင်ယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းညွှန်ပြ။ ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှု ၁၀၀ အတွင်းလေ့လာမှုအများစုပြုလုပ်သောအချိန်တွင်အရွယ်ရောက်ယောက်ျားများနှင့်ထိတွေ့သည့် pubescent အမျိုးသမီးများသည်အရွယ်ရောက်ယောက်ျားများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသောအမျိုးသမီးများထက် CRs နည်းပါးသည်။ [F (100) = 4,40; p <3.28] ။ အရွယ်ရောက်ယောက်ျား (SCAR) နှင့်ထိတွေ့သောအမျိုးသမီးများသည်လေးရက်တာကာလအတွင်းစမ်းသပ်မှု ၁၀၀ ရှိလုပ်ကွက်များ၌ CRs နည်းပါးလာသည်။ [F (0.05 = 100; p <1,10; သင်္ဘောသဖန်း။ 2C) ။ ဤရလဒ်များအရအုပ်စုနှစ်စုလုံးလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြသော်လည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည့်အမျိုးသမီးများသည်အချိန်ကိုက်အချိန်မီ CRs (ဥပမာသဲလွန်စကြားကာလ) တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ CRs ရာခိုင်နှုန်းသည်နောက်ဆုံးသောနေ့၌တိုးပွားလာခြင်းမရှိ (p = 0.11)၊ သေးဖျော်ဖြေပွဲအရွယ်ရောက်အထီးနှင့်ထိတွေ့အမျိုးသမီးနှင့် (p <0.001) နှင့်ထိတွေ့အမျိုးသမီးအကြားကွဲပြားခြားနားရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါအေးစက်ဒေတာကိုတုံ့ပြန် 60% ၏တစ် ဦး မတရားသင်ယူမှုစံသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်ကိုအစက်အပြောက်အဖြစ်ပြသည် သင်္ဘောသဖန်း။ 2C တုံ့ပြန်အေးစက် 60% ညွှန်ပြရန်။ အားလုံးထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည် (အဘယ်သူမျှမအမာရွတ်;6/ 6) တွင်အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးကသာ 60% သော်လည်း, 800 စမ်းသပ်မှုတွေနှင့်အတူတုံ့ပြန် 50% တစ်သင်ယူမှုစံနှုန်းရောက်ရှိ (3 / 6) ကအမာရွတ်အုပ်စုကိုပြု၏။
စမ်းသပ်မှု 4: အမာရွတ်မိခင်ာင်းနှောင့်အယှက်ပါသလား?
အရွယ်ရောက်ပြီးသူကညာအမျိုးသမီးမွေးကင်းစ pup ထိတွေ့တုန့်ပြန်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမိခင်အပြုအမူတွေကိုဖျောပွနိုငျ14,20 မိခင်ာင်းအဖြစ်လူသိများနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်းဤရွေ့ကားအတူတူပင်အပြုအမူတွေ, အပျိုဖော်ဝင်များတွင်အမျိုးသမီးများကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည် သင်္ဘောသဖန်း။ 3A။ အမာရွတ်ထိတွေ့မှုမိခင်ာင်းလျှော့ချရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, တစ်ခုချင်းစီ pubescent ကညာအမျိုးသမီးကြွက် (ဎ = 8) PND21 အပေါ်စတင် 35 ရက်ဆက်တိုက်များအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး (အမာရွတ်) ထိတွေ့ခဲ့သည်။ တစ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တစ်ဦး pubescent အမျိုးသမီး၏အုပ်စု (ဎ = 8) တူညီသောအချိန်ဇယားအရသိရသည်တစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့ဗလာလှောင်အိမ်ထဲမှာတစ်ဦးတည်းထားရှိခဲ့ကြသည်။ အမာရွတ်ထိတွေ့မှု၏ပဉ်စမနေ့တွင်, PND39 နှစ်ခုမွေးကင်းစ postnatal ခွေးများ (PND 1-10) 24-ဇများအတွက် pubescent အမျိုးသမီးရဲ့အိမျလှောင်အိမ်ထဲမှာထားကြ၏။ အဆိုပါခွေးများသူတို့ရဲ့နို့တိုက်ဆည်နှင့်အတူ 24-ဇဖြုန်း, Non-စမ်းသပ်ရေကာတာကနေမွေးဖွားထို့ကြောင့်အစာအာဟာရအဘို့မိမိတို့မူရင်းဆည်မှပြန်လာသောသည် 24 နာရီဂရုစိုက်ခဲ့သည်။ မွေးကင်းစ pup ကျန်းမာရေးမျှတရှိ၏ ခွေးများ၎င်းတို့၏မူလရေကာတာများကလျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်လျှင်, သူတို့သည်လေ့လာမှုကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ မိခင်အပြုအမူလေ့လာတွေ့ရှိချက်အဘို့, ခွေးများအိမ်လှောင်အိမ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်မှာအရပျကို ရှိ. , မိခင်အပြုအမူတွေကိုနေရာချထားပြီးနောက်ပထမဦးဆုံး 10 မိနစ်လေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါမှတ်တမ်းတင်ထားသောအပြုအမူ 1) ခွေးများ၏လျက် / ဖြီးလိမ်းပုံ, 2) ဖြစ်စေတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုခွေးများ၏ retrieval နှင့်ခွေးများ၏ 3) အုပ်စုရှိကြ၏။ မိခင်အပြုအမူတွေကိုအပြည့်အဝအဖြည့်နှစ်ဦးကိုရက်ဆက်တိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်ပြီးတာနဲ့အမျိုးသမီးမိခင်ာင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
ပုံ 3: အမာရွတ်မိခင်အပြုအမူအရေးကြီးတဲ့ disrupts ။
(Aအပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးထိတွေ့ခဲ့) Pubescent အမျိုးသမီး (အမာရွတ်) 17 ကာလ၏သင်တန်းကျော်မိခင်အပြုအမူတွေကိုဖော်ပြသင်ယူဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ သုံးဦးသာထိုအမြိုးသမီး (3 / 8) ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးထိတွေ့ကြသည်မဟုတ်သောကညာအမျိုးသမီးအားလုံးသော်လည်းမိခင်အပြုအမူတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆို (8 / 8) ကိုပြု၏။ (Bက) မိခင်အပြုအမူတွေ၏နံပါတ်များကို (ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့, ပြန်လည်ရယူရန်နှင့် pup အာဆီယံ)3တစ်အလားအလာစုစုပေါင်းရမှတ်အဘို့နေ့ရက်တိုင်းနေရာယူခဲ့ကြသည်။ အရွယ်ရောက်သူအထီး (အမာရွတ်) ထိတွေ့ Pubescent အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးအရွယ်ရောက်သူအထီး (အဘယ်သူမျှမအမာရွတ်) ထိတွေ့ဘူးထက်ကဤအပြုအမူများနည်းပါးလာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
အောက်ပါမိခင်အပြုအမူများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခဲ့သည်။ မိခင်များ၏အပြုအမူအရေအတွက်ကိုနေ့တိုင်းတွက်ချက်သည်။ ၃။ စုစုပေါင်းရမှတ်များအနေဖြင့်ခွေးများနှင့်ထိတွေ့သည့်နေ့များတစ်လျှောက်ကှဲလှဲမှုနှင့်ထပ်တူထပ်မျှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် SCAR အခြေအနေသည်မိခင်အပြုအမူများသိသိသာသာတိုးလာခြင်းကိုညွှန်ပြခဲ့သည် [F (3) = 16; p <8.39; သင်္ဘောသဖန်း။ 3B] နှင့်အမာရွတ်ထိတွေ့မှု [F (1,16) = 2.18 နှင့်အတူအပြန်အလှန်; p <0.01] ။ ခန္ဓာကိုယ်၏အပြုအမူများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုများသည်ကလေးငယ်များနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် (p <0.05) ခုနစ်ရက်အတွင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ SCAR အမျိုးသမီးအများစုသည်မိခင်အပြုအမူသုံးမျိုးလုံးကိုဖော်ပြခြင်းမပြုခဲ့သော်လည်းအထီးများနှင့်ထိတွေ့မှုမရှိသောအမျိုးသမီးများ (၈/၈) က ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်းမိခင်အပြုအမူများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။သင်္ဘောသဖန်း။ 3A).
စမ်းသပ်မှု5။ အမာရွတ်ကတော့ hippocampus အတွက်အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆဲလ်နှောင့်အယှက်ပါသလား?
ပထမဦးစွာကျွန်တော်တစ်ဦးအမာရွတ်ထိတွေ့မှု၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုနာရီအတွင်း dentate gyrus အတွက် proliferating ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုအပေါ်အမာရွတ်ထိတွေ့မှု၏အလားအလာသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ တစ်ခုတည်း 5-မိအမာရွတ်ထိတွေ့ခြင်းမပြုမီချက်ချင်းနှင့် BrdU ဆေးထိုးအောက်ပါ2နာရီယဇျပူဇျော (ဎ = 200); အမျိုးသမီး 30-bromo-2-deoxyuridine များထဲမှ intraperitoneal ဆေးထိုး (5 / ကီလိုဂရမ် MG BrdU) နဲ့ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ cell နံပါတ်များကို BrdU နှင့်အတူထိုးသွင်းခြင်းနှင့်နှစ်နာရီအကြာတွင်ယဇျပူဇျောခဲ့အုပ်စုတစ်ခုရှိသူတို့ (ဎ = 6) ကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယအနေကျနော်တို့တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်၏သင်တန်းကျော်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးထိတွေ့ပြီးနောက် BrdU နှင့်အတူတံဆိပ်ကပ်ခဲ့ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုအပေါ်အမာရွတ်ထိတွေ့မှု၏အလားအလာသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, pubescent အမျိုးသမီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ PND8 (ဎ = 35) မှာစတင်7ရက်ဆက်တိုက်တစ်ခုချင်းစီကိုနေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးထိတွေ့ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ6မတိုင်မီ BrdU နှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြth ထိတွေ့မှု (PND 40) နှင့်ဆေးထိုးပြီးနောက်တစ်ပတ်အတွင်းယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းကျန်ရစ်သောခဲ့ကြသည်အမျိုးသမီး၏အုပ်စု (ဎ = 4), PND 40 အပေါ်တစ်ဦး BrdU ဆေးထိုးအပ်နဲ့တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ ဆဲလ်ရှင်သန်မှုအပေါ်အမာရွတ်၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ရန်, တိရစ္ဆာန်များ၏အုပ်စုတစုကိုတစ်ကြိမ် BrdU နှင့်အတူထိုးသွင်းနှစ်ဆယ်တဦးတည်းရက်ပေါင်းတ BrdU ဆေးထိုး (အဘယ်သူမျှမအမာရွတ်; ဎ = 7) အပြီးယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ BrdU နှင့်အတူထိုးသွင်းပြီးတော့ PND5 မှာစတင် 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့အသီးအသီးနေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမှ 21-မိဘို့ထိတွေ့ခဲ့; BrdU နှင့်အတူတံဆိပ်ကပ်ခဲ့ဆဲလ်အရေအတွက်အုပ်စုတစု (ဎ = 35 အမာရွတ်) တွင်နံပါတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
Immunohistochemistry BrdU-label တပ်ထားသောဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကောက်ယူခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆိုဒီယမ် pentobarbital နှင့်အတူ anaesthetized ခဲ့ကြသည် (100 / ကီလိုဂရမ် mg; ဘတ္ Schein, Indianapolis, IN, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နှင့် transcardially4M ကဖော့စဖိတ်ကြားခံအတွက် 0.1% paraformaldehyde နှင့်အတူ perfused ။ ဦးနှောက် buffered ဆား (PBS) ဖော့စဖိတ်ပြောင်းရွှေ့မခံရမီ, တစ်ရှူးဖွဲ့စည်းပုံကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ 4-4-ဇများအတွက် 24 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 48% paraformaldehyde အတွက်ထုတ်ယူနဲ့ post-fixed ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးက vibratome တဦးတည်း hemisphere အတွက် dentate gyrus ၏တစ်ခုလုံးကို rostral-caudal အတိုင်းအတာမှတဆင့်40μm Coronal ကဏ္ဍများကိုဖြတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပြန့်ပွားမ hemisphere ကွဲပြားခြားနားမှုလက်ဝဲနှင့်လက်ယာ dentate gyrus အကြားလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်အတိုင်းဤကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာစံအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်21,22။ တိုင်းဒွါဒသမအချပ်တစ် superfrost ဖန်ဆလိုက် (Fisher ကသိပ္ပံ, Suwane, ဂျော်ဂျီယာ, အမေရိကန်နိုင်ငံ) ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်လေထုခြောက်ကပ်သောရန်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ပြီးတာနဲ့ခြောက်သွေ့တစ်သျှူးယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ BrdU ထည့်သွင်းသောဆဲလ်များကိုမြင်ယောင်ရန်စံ peroxidase နည်းလမ်းများသုံးပြီးစွန်းခဲ့သည်22။ တစ်ရှူး PBS နှင့်အတူ 0.1-မိဘို့, အပူ 6.0 M က citric အက်ဆစ် (pH ကို 0.1) နဲ့ pretreated 10 M ကို PBS နှင့်အတူဆေး, 2-မိဘို့ trypsin နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးနှင့် 30N HCl အတွက် denatured ခံခဲ့ရသည်ကြား၌ rinses ။ တစ်ရှူးမူလတန်း mouse ကိုဆန့်ကျင် BrdU အတွက်နေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည် (1: 200; Becton-Dickinson, Franklin အေိုငျမြား, NJ, USA) နှင့် 0.5% Tween-20 (Vector Laboratories, Burlingame,, CA, USA) ။ 1-မိနှင့် avidin-ဓါတ်-horseradish peroxidase ထဲတွင်နေရာများအတွက်: တစ်ရှူး biotinylated Anti-mouse ကို antibody ကို (200, Vector Laboratories 60) တွင်နက်ဖြန်နေ့၌နှင့်ဆေးနှင့်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည် (1: 100; Vectastain ABC ရုပ်သံ Kit, Vector Laboratories) 60 များအတွက် -Min ။ တစ်ရှူးလေးမိနစ် diaminobenzidine (DAB SigmaFrost Tablets, Sigma Aldrich) တွင်ထားရှိနှင့်ဆေး, 0.1% cresyl ခရမ်းရောင်နှင့်အတူ counterstained, ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်း, ရှင်းလင်းခြင်း, အဖုံး Permount ကော် (Fisher ကသိပ္ပံ) နှင့်ချော်ခဲ့သည်။
quantitative ဏုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ခုချင်းစီဆလိုက် coding အားဖြင့်စမ်းသပ်အခွအေနေမှမျက်စိကန်းဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ BrdU-အပြုသဘောဆဲလ်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြေတစ်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ဘက်မလိုက် stereology protocol ကို အသုံးပြု. ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်23,24။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချပ်၏ dentate gyrus အတွက် BrdU-အပြုသဘောဆဲလ် (granules ဆဲလ်အလွှာများနှင့် hilus) ၏နံပါတ်တစ်က Nikon Eclipse 1000 အပေါ် 80X မှာလက်ဖြင့်ရေတွက်ခဲ့သည်ဈဏု်လင်း။ အဆိုပါ hippocampus ၏ rostral caudal အတိုင်းအတာတစ်လျှောက်လုံးဆယ်ပါးချပ်ဟာဆလိုက်ပေါ်စုဆောင်းခဲ့ကြခြင်းနှင့်အရေအတွက်ကနှစ်ဦးစလုံး hemisphere အတွက် dentate gyrus အတွက် BrdU-အပြုသဘောဆဲလ်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်၏တစ်ဦးခန့်မှန်းချက်ရရှိရန် 24 အားဖြင့်များပြားစေခဲ့သည်။
ထဲမှာ; မိခင်သေခြင်းမှ neuron အသစ်တွေကယ်တင်နိုင်ခဲ့ "သင်ယူခြင်း" နှင့် / သို့မဟုတ်အမာရွတ်ရှိမရှိသူတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုတားဆီးလို့အရွယ်ရောက်သူအထီး (ဎ = 7) သို့မဟုတ်မ (ဎ =7အဘယ်သူမျှမအမာရွတ်) ထိတွေ့ခဲ့ pubescent အမျိုးသမီးအုပ်စုများရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ ယခင်စမ်းသပ်မှု BrdU နှင့်အတူတစ်ချိန်ကထိုးသွင်းခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဆဲလ်နံပါတ်များခွေးများထိတွေ့မဟုတ်ခဲ့နောက်ထပ်အုပ်စုများရှိသူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် (အမာရွတ်, ဎ = 5; အဘယ်သူမျှမအမာရွတ်, ဎ = 7) ။ အသစ်ကဆဲလ်တွေအများစု Programs ဆဲလ်အသေခံကိုခံယူမယ်လို့သကဲ့သို့တစျခုတပတ်အကြာတွင်မှတ်ချက်ချသကဲ့သို့, အမျိုးအနွယ်နှင့်အတူမိခင်ာင်းစတင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးအမျိုးအနွယ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီညနပေိုငျးသျောခဲ့ကြသည်များနှင့်စမ်းသပ်မှု4ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့မိခင်အပြုအမူတွေ, မှတျတမျးတငျထားနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ သုံးပတ် BrdU ဆေးထိုးပြီးနောက်, အမျိုးသမီးလေးအုပ်စုများဆိုဒီယမ် pentobarbital နှင့်ဦးနှောက်၏တစ်ဦးသေစေလောက်ထိုး immunohistochemistry နှင့်ဏုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအဘို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ ကြောင့် BrdU ထိုး၏သဘောသဘာဝမှဤအုပ်စုများအတွက်တိရစ္ဆာန်များ၏အရေအတွက်ကိုစမ်းသပ်မှု4အတွက်တင်ပြဒေတာကနေဂဏန်းထက်သေးငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ dorsal နှင့် ventral hippocampus အကြားဆဲလ်အရေအတွက်အလားအလာကွဲပြားခြားနားမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ရန်, ventral ဒေသတွင်း၌ BrdU အမည်တပ်ထားသောဆဲလ် interaural သြဒီနိတ်နှင့်အညီ dorsal ရှိသူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ ventral, (interaural 3.70 မီလီမီတာမီလီမီတာ 6.88 မှ) အ caudal hippocampus ကနေအချပ်တွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်သော်လည်းအဆိုပါ dorsal hippocampus, (interaural 2.28 မီလီမီတာမီလီမီတာ 3.70 မှ) အ rostral hippocampus ကနေအချပ်တွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်25.
BrdU-label တပ်ထားသောဆဲလ်အရေအတွက်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားနှင့်ထိတွေ့မိသည့်အမျိုးသမီးများအကြားတွင်ကွာခြားမှုမရှိဘဲ ၂- နာရီသို့မဟုတ် ၁ ပတ်အကြာတွင်ယဇ်ပူဇော်ခဲ့သည် (p> 2; သင်္ဘောသဖန်း။ 4A, B,) ။ ဤတိုင်းတာမှုများ (၂ နာရီ၊ ၁ ပတ်၊ ၃ ပတ်) တွင် dorsal နှင့် ventral hippocampi (p> 0.05) အကြားမည်သည့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုမျှမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ထို့အပြင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားတစ် ဦး တည်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည် BrdU-label တပ်ထားသောဆဲလ်အရေအတွက်ကိုသိသိသာသာမထိခိုက်စေပါ (p = 2; သင်္ဘောသဖန်း။ 4C နှင့် သင်္ဘောသဖန်း။ 5A) ။ သို့သော် BrdU-label တပ်ထားသောဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုမိခင်ာင်း (F ကိုစဉ်အတွင်းခွေးများထိတွေ့ခဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်တိုးလာ(1,25) = 10.03; p <0.005; သင်္ဘောသဖန်း။ 5A) ။ ဤအချက်အလက်များအရလှောင်အိမ်အတွင်းရှိကလေးငယ်များရှိနေခြင်းသည် Hippocampus ၏သွားဖုံး gyrus တွင်အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်သောအာရုံခံဆဲလ်များ၏ရှင်သန်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်လုံလောက်နိုင်သည်။ pup ထိတွေ့မှုနှင့် SCAR ထိတွေ့မှုအကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာသိသာထင်ရှားသည်။ [F (1,22) = 3.66; p = 0.068) ။ စီစဉ်ထားသောနှိုင်းယှဉ်ချက်များအရအရွယ်ရောက်ယောက်ျားများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသော်လည်းခွေးကောင်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသောအမျိုးသမီးများသည်သွားကောင်များသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသောအမျိုးသမီးများထက် dentate gyrus granule ဆဲလ်အလွှာတွင် BrdU-label တပ်ထားသောဆဲလ်များရှိကြောင်းညွှန်ပြခဲ့သည် (p = 0.002) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အရွယ်ရောက်ယောက်ျားနှင့်ထိတွေ့မိပြီးခွေးများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည့်အမျိုးသမီးများသည်ခွေးများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသော BrdU-label တပ်ထားသောဆဲလ်များမရှိခဲ့ပါ (p = 0.41) (၃) ပတ်အတွင်း hippocampus တွင်ကျန်ရှိနေသေးသောဆဲလ်အရေအတွက်နှင့်ခလေးများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားသည့်မိခင်အပြုအမူများအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည် (r = 0.55; p <0.05) ။ အာရုံခံစားနေစဉ်မိခင်၏အပြုအမူကိုဖော်ပြရန်အလားအလာနည်းသောအမျိုးသမီးများသည်ဆဲလ်အသစ်များနည်းပါးလာသည်။ ထို့ကြောင့် hippocampus ရှိဆဲလ်အသစ်များ၏ရှင်သန်မှုအပေါ် SCAR ၏အလားအလာရှိသောသက်ရောက်မှုသည် SCAR အတွေ့အကြုံ၏စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်သောဆဲလ်များ၏ရှင်သန်မှုကိုတိုးမြှင့်ပုံပေါ်သောမိခင်အပြုအမူများလေ့လာမှုကိုလျှော့ချသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ဤအချက်အလက်များသည်အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမအချက်မှာ ၄ င်းတို့အနေဖြင့်မျိုးပွားခြင်းနှင့် Hippocampus ရှိအသစ်ထုတ်လုပ်ထားသောဆဲလ်များ၏ရှင်သန်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်လုံလောက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အချက်အလက်များအရ SCAR ၏အတွေ့အကြုံသည်မိခင်ဖြစ်လာရန်သင်ယူခြင်းတွင်လိုအပ်ချက်များအားနည်းခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသမီး hippocampus ရှိအသစ်စက်စက်ဆဲလ်များ၏ရှင်သန်မှုကိုလျော့ကျစေသည်။
ပုံ 4: အမာရွတ်ကတော့ hippocampus အတွက်အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆဲလ်ပြန့်ပွားမှုကိုလျှော့ချခဲ့ပါဘူး။
(A) အမာရွတ်ထိတွေ့မှုနှစ်နာရီအကြာတွင်အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ (BrdU-label တပ်ထားသော) ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါဘူး။ (Bအဆိုပါ BrdU ဆေးထိုးပေမယ့်အမာရွတ်ထိတွေ့မှုဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကိုပြောင်းလဲပစ်မပြုခဲ့ပြီးနောက်) BrdU-label တပ်ထားသောဆဲလ်အရေအတွက်တစ်ပတ်ကာလအတွင်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ (C) သုံးပတ်အကြာမှာတော့အများဆုံး BrdU-label တပ်ထားသောဆဲလ်တွေမရှိတော့ပစ္စုပ္ပန်တို့ဒါကြောင့်, ယူဆရကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ (D,Eတစ်ဦး pubescent အမျိုးသမီး၏ dentate gyrus (granules ဆဲလ်အလွှာ) တွင် 400X နှင့် 1000X မှာ BrdU-label တပ်ထားသောဆဲလ်၏) ကိုယ်စားလှယ် photomicrographs ။
ပုံ 5: အ dentate gyrus အတွက်အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆဲလ်ရှင်သန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်ခွေးများ၏မိခင်ထိခိုက်စေဂရုစိုက်။
(Aအဆိုပါခွေးများထိတွေ့မဟုတ်ခဲ့ pubescent အမျိုးသမီးလုပ်ခဲ့တယ်ထက်) BrdU နှင့်အတူထိုးသွင်းခြင်းနှင့်မိခင်အကဲဆတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှတဆင့်အမျိုးအနွယ်နှင့်ထိတွေ့ခဲ့ Pubescent အမျိုးသမီးအဆိုပါ BrdU-label တပ်ထားသောဆဲလ်တွေပိုပြီးထိန်းသိမ်းထား။ (Bအရွယ်ရောက်သူအထီးထိတွေ့ခဲ့) မိန်းမတွေကမိခင်အပြုအမူတွေကိုဖော်ပြလျော့နည်းဖွယ်ရှိတို့နည်းပါးလာ BrdU-label တပ်ထားသောဆဲလ်ထိန်းသိမ်းထား။ ဤအဆဲလ်များ၏ကျယ်ပြန့်အများစုတွင် neuron သို့ရင့်ကျက်ပါလိမ့်မယ်သောကြောင့်ဤဒေတာမိခင်တစ်ဦးဖြစ်လာရန်လေ့လာသင်ယူအမျိုးသမီး hippocampus အတွက်အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အာရုံခံ၏ရှင်သန်မှုမှအပြုသဘောပြောပြတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်အများအပြားယဉ်ကျေးမှုအတွက်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအဘို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံအပျိုဖော်ဝင်နှင့်အစောပိုင်းလူကြီးလူငယ်အမျိုးသမီးအထူးသဖြင့်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်လူသားကန့်သတ်မရဖြစ်ပြီး nonhuman မျောက်ဝံများမှတွားသွားသတ္တဝါကနေကြွက်အထိမျိုးစိတ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ရှာဖွေရေးကာလအတွင်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်26,27,28,29,30,31,32။ ဒါဟာကျူးကျော်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတူးဖော်ရေးစဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်, ယောက်ျားမျိုးပွားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အမျိုးသမီးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ရန်ခွင့်ပြုတွေးဆထားသည်27,33,34။ အတော်များများကလေ့လာမှုများအထီးနှင့်အချို့အကြားရန်လိုအပြုအမူတွေကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်ယောက်ျားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားကျူးကျော်လေ့လာပေမယ့်အထီးတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အများဆုံးအာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ အလွန်နည်းပါးဓာတ်ခွဲခန်းမော်ဒယ်များအပျိုဖော်ဝင်နှင့်အစောပိုင်းလူကြီးကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်သူများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ဖို့အမျိုးသမီးတုံ့ပြန်မှုအပေါ်သီးသန့်အာရုံစူးစိုက်35,36,37,38,39။ ဒီလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကျနော်တို့သူမကငယ်ရွယ်လူကြီးရောက်ရှိသည်အထိတစ် pubescent အမျိုးသမီးထပ်တလဲလဲတစ်လိင်-အတွေ့အကြုံရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး conspecific ထိတွေ့သောကာလအတွင်းအမာရွတ်အဖြစ်လူသိများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းမော်ဒယ်, တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအပြန်အလှန်အတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမှထုတ်ပြန်သောသူမ၏အင်္ဂါဇာတ်တူးမြောင်းအပြည့်အဝပွင့်လင်းမဟုတ်ပါဘူးသော်လည်းဆင်း, တံသင်ချဉ်းကပ်နှင့် pubescent အမျိုးသမီးကြွက် mount ရန်ကြိုးစား (သဖန်းသီး။ 1). အများဆုံးတသမတ်တည်းအပြုအမူဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားနေလှောင်အိမ်န်းကျင်အမျိုးသမီးလှံလက်နက်အဖြစ် anogenital ဒေသလိုက်ရှာမထွက်ရ anogenital ခြေရာခံခြင်း, ဖြစ်ခဲ့သည်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါအပြန်အလှန်အတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမကြာခဏဆိုသလိုအမျိုးသမီးချ pin မယ်လို့ပေမယ့်သူမဒါအသေးစားနှင့်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်သောကြောင့်, သူမမပြေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာဆို intromissions လျှင်အနည်းငယ် ရှိ. , ထို့ကြောင့် interaction ကသုတ်ရည်ထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ pubescent အမျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရန်နိုငျသောကွောငျ့ဤအဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်းသူမအင်္ဂါဇာတ်တူးမြောင်းအပြည့်အဝပွင့်လင်းခြင်းနှင့်သူမ ovulating မကြောင့်။ စိတ်ဝင်စားစရာကျူးကျော်-related အပြုအမူတွေကို (တံသင်နှင့် anogenital Track) ၏နံပါတ်များကိုရက်ပေါင်းကျော် habituate နှင့်ပင်ထိတွေ့မှုရှစ်ရက်အကြာမှာသူတို့၏ပြင်းထန်မှုထိန်းသိမ်းထားနှင့် pubescent အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာင့်ကျက်မှုသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်အဖြစ်မပေးခဲ့ပါဘူး။
စမ်းသပ်ချက်များပစ္စုပ္ပန်ထား၏ရည်မှန်းချက်များတစ်ခုမှာအမျိုးသမီးအတွက်အမာရွတ်စိတ်ဖိစီးမှု၏လက်တွေ့မော်ဒယ်တည်ထောင်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများကနေကျနော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုဘဝအတှေ့အကွုံအာရုံခံခြင်းနှင့်အမူအကျင့်ရလဒ်များအပေါ်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများစွာသောလူရှိကြောင်းကိုသိရ။ ဒါကအများကြီးလျော့နည်းသူတို့လေ့အမျိုးသမီးငယ်များကကြုံတွေ့ဖိအားကိုကိုယ်စားပြုကြဘူး, အရှိဆုံးတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်နေထိုင်သောလူသားမြားဖွငျ့ကြုံတွေ့ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းဖိအား (ဆိုလိုသည်မှာထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှု, ဆန္ဒရှိလှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုရေကူး) အပေါ်မှီခိုကပြောသည်။ ယောက်ျားနှင့်အတူရင်ဆိုင်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အလားအလာဆန္ဒရှိခဲ့ကြောင်း verify လုပ်ဖို့ကျနော်တို့တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးသော corticosterone ပြင်းအား, တိုင်းတာ။ တစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီး (အတူတွဲခဲ့ pubescent အမျိုးသမီးတစ်အုပ်စုတွင်ပြင်းအားဆိုလိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာယုတ်ပြင်းအားသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 2A) ။ သီးခြားစမ်းသပ်မှုမှာတော့ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအချိန်၏တူညီသောငွေပမာဏများအတွက်ဝတ္ထုအခြေအနေတွင်၌ထားကြ၏ကြောင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ (နှိုင်းယှဉ်အခါအပြန်အလှန် corticosterone ၏ပြင်းအားခြီးမွှောကျကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 2B) ။ ဤအရလဒ်များကိုအခြေခံပြီးကျနော်တို့ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ကောက်ချက်ချတဲ့ဝတ္ထုအခြေအနေတွင်အခြားအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ထက်အမျိုးသမီးနှင့်ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အမာရွတ်အတွေ့အကြုံကိုနှုန်း se အသစ်အဆန်း, ထက်ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလည်း, ထိုအပြုအမူအစည်းအဝေးများကျော် habituate မပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ပင်ရှစ်ရက်အကြာတွင်မွငျ့မားကျန်ရစ်။ ကျနော်တို့က corticosterone ပြင်းအားမြင့်မားသောရှိနေဆဲမယ်လို့ဖွယ်ရှိသည်, ဤအချိန်အမှတ်မှာ corticosterone ပြင်းအားကိုတိုင်းတာပေမယ့်အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲမပေးထားခဲ့ပါဘူး။ အနည်းဆုံးအဲဒီဒေတာအမာရွတ်အတွေ့အကြုံကိုဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့နာရီအနည်းငယ်၏သင်တန်းကျော် HPA တုံ့ပြန်မှုကိုသက်ဝင်ဖို့လုံလောက်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လူမှုရေးအပြန်အလှန်နှင့်ကျူးကျော်များ၏လေ့လာမှုရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်အများဆုံးလေ့လာမှုများအထီး / အထီးကျူးကျော်အာရုံစိုက်ပါ။ တဦးတည်းမော်ဒယ်ငါတို့ဆင်တူသည်နှင့်အမျှလူငယ်လူမှုရေးလက်အောက်ခံတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုတွေမှာတော့ pubescent အထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက် 10-မိတွေ့ဆုံဘို့အရွယ်ရောက်အမျိုးသားများနှင့်အတူချထားပါသည်။ ယေဘုယျအား၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်အမျိုးသမီးဦးနှောက်ဟာတှေ့ဆုံရန်၎င်း၏တုံ့ပြန်မှုပိုမိုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်လျော့နည်းရွေးချယ်ခဲ့တာညွှန်ပြ39,40။ အထူးသဖြင့် activated ခဲ့ဦးနှောက်ဒေသများအတွက် amygdala ၏ basolateral နျူကလိယက, stria terminalis နှင့် hypothalamus ၏အိပ်ရာနျူကလိယတို့ပါဝင်သည်။ ချက်ပြုတ်နှင့်သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုလည်းတွေ့ဆုံပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်-related အပြုအမူတွေကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးအထူးသဖြင့်တစ်ဦးအတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးမွငျ့မားသောပေါင်းဝင်္၏ပိတ်ထားသောလက်မောင်းများတွင်သုံးစွဲပိုပြီးအချိန်နှင့်ပိုပြီးအကူအညီမဲ့အပြုအမူနှင့်အတူထိခိုက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာသူတို့အားအပြုအမူတွေကိုတိုင်းတာမပြုခဲ့ပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမှနေ့စဉ်ထိတွေ့ပြီးနောက် pubescent အမျိုးသမီးအလားတူအပြောင်းအလဲများကိုမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ အဲဒီအစားနှုန်း se စိတ်ကျရောဂါအပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များ၏, ငါတို့သင်ယူမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်ကဒီမှာအာရုံစူးစိုက်။ ထိုအမှာပြထားတဲ့အတိုင်း သင်္ဘောသဖန်း။ 2C, အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်းရန်လိုအထီးမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုသဲလွန်စအေးစက်နေစဉ်အတွင်း ie အချိန်အတွက်ကွဲကွာခဲ့ကြနှစ်ခုလှုံ့ဆော်မှု, ပေါင်းသင်းသင်ယူဖို့အမျိုးသမီးရဲ့စွမ်းရည်ကိုနှောင့်အယှက်။ ငါတို့သည်လည်း (သင်ယူခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောမိခင်အပြုအမူတွေအပေါ်အမာရွတ်၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်သဖန်းသီး။ 4) ။ Young ကအမျိုးသမီးကြွက်သူတို့နေဆဲသတို့သမီးကညာများဖြစ်ကြသည်လျှင်ပင်, အမျိုးအနွယ်ကိုအဘို့အဂရုစိုက်ဖို့သင်ယူပါလိမ့်မယ်။ မိခင်အကဲဆတ်ခြင်းဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမကြာခဏမိခင်အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အမျိုးသမီးဦးနှောက်အကဲဖြတ်ရန်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါရန်လိုခြင်းနှင့်လိင်အတွေ့အကြုံရှိအထီးမှထိတွေ့မှု, သဘာဝအခြေအနေများအောက်တွင်ရှင်သန်ရပ်တည်ကြောင်းအမျိုးအနွယ်၏နံပါတ်ကန့်သတ်မယ်လို့တစ်တုံ့ပြန်မှုရှုပ်ထွေးမိခင်အပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စကားရပ်နှောင့်အယှက်။
အဆိုပါ pubescent ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝအတွေ့အကြုံများမှအထူးသဖြင့်ပလပ်စတစ်နှင့်အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်15,41။ အဆိုပါ hippocampus လူကြီးထက်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းနေ့တိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာပိုပြီးဆဲလ်တွေထုတ်ပေး15. သို့သော်ဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုကိုမကြာခဏစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံကိုအားဖြင့်ယုတ်လျော့နေသည်။ အမာရွတ်အတှေ့အကွုံပု hippocampus အတွက်ဆဲလ်ပြန့်ပွားမှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, pubescent အမျိုးသမီးအဖွဲ့များကအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးထိတွေ့သို့မဟုတ်မ, အဖြစ်မရောက်မီ, ပြီးတော့ BrdU (က mitosis အမှတ်အသား) နဲ့ထိုးသွင်းခြင်းနှင့်နှစ်နာရီ, တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်သုံးပတ်အကြာတွင်ယဇျပူဇျောခဲ့ကြ ။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆဲလ်ရှင်သန်မှုနှိုင်းယှဉ်ဟာပြန့်ပွားပေါ်မှာအမာရွတ် (အရွယ်ရောက်သူအထီးမှထိတွေ့မှု) ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဤအအချိန်မှတ်၏တစ်ဦးချင်းစီမှာစည်းဝေးသော BrdU အမည်တပ်ထားသောဆဲလ် mean နံပါတ်များအမာရွတ်အတွေ့အကြုံကိုဆဲလ်ပြန့်ပွားအတွက်ကျဆင်းခြင်းမှတဆင့် neurogenesis လျှော့ချမပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြုသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မသောသူတို့ကိုအထိတွေ့အမျိုးသမီးအကြားအလားတူခဲ့ကြသည် (သဖန်းသီး။ 4) ။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအပျိုဖော်ဝင်များတွင်တိရစ္ဆာန်များအရွယ်ရောက်တိရိစ္ဆာန်များထက်အများကြီးပိုပြီးပိုပြီးအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အာရုံခံထုတ်လုပ်ရန်15။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကနဦးဆေးထိုးပြီးနောက် 2-ဇသို့မဟုတ်တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်ပစ္စုပ္ပန် BrdU-label တပ်ထားသောဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုပေါ်တွင်အမာရွတ်အတှေ့အကွုံအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ရှိ၏။ ယင်းအစားခြားနားချက် (သုံးပတ်ကနဦးဆေးထိုးပြီးနောက်သာမိခင်ာင်းအတွေ့အကြုံကိုတုံ့ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 5A). ထို့ကြောင့်လက်ရှိရလဒ်များမိခင်အပြုအမူမဟုတ်ဘဲဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုထက်လာတော့သည်သည့်အခါပြီးသားစည်းဝေးသောအသစ်သောဆဲလ်များရှင်သန်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုညွှန်ပြ, က de Novo.
ထောင်ပေါင်းများစွာသောသစ်ကိုဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်ပြီးခံရမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသေဆုံးအဖြစ်အများအပြားတစ်ဝက်အဖြစ်သို့မဟုတ် ပို. ပင်၏အသီးအသီးနေ့ကမွေးဖွားနေကြသော်လည်း21။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း သဖန်းသီး။ 4ပိုတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အတွင်းထုတ်ပေးသစ်ကို hippocampal ဆဲလ်၏ထက်ဝက်ထက်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာအတွင်းမရှိတော့သည်စည်းဝေးကြ၏။ ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများတစ်စီးရီးအတွက်ကျနော်တို့သစ်ကိုဆဲလ်တွေအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းထုတ်ပေးဆဲလ်တွေအပါအဝင်အားထုတ်မှုသင်ယူမှုအားဖြင့်သေခြင်းမှကယ်တင်နိုင်ခဲ့နိုင်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့15,16။ ကျနော်တို့သဲလွန်စ eyeblink အေးစက်နှင့်အတူလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆဲလ်ရှင်သန်မှုဆန်းစစ်ကြဘူး။ အမာရွတ်အမျိုးသမီးကတော့အေးစက်တုန့်ပြန်သင်ယူရမပြုခဲ့ရိုးရှင်းစွာသောကွောငျ့သို့သော်ငါတို့သည်အမာရွတ်အမျိုးသမီးအတွက်သေခြင်းမှ neuron အသစ်တွေကယ်တင်ရန်လေ့ကျင့်ရေးကိုမျှော်လင့်မဟုတ်ဘူး42,43,44. ပစ္စုပ္ပန်ဒေတာအမျိုးအနွယ်နှင့်အတူနေ့စဉ် interaction ကနောက်ထပ်အမျိုးအနွယ်၏ရှေ့မှောက်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ထိုလူငယ်အမျိုးသမီးအတွက်ဖြစ်ပေါ်သောဆဲလ်အသေခံတားဆီးနိုင်သည်ကိုအကြံပြုသည် pubescent အမျိုးသမီးအတွက်အသေခံကနေအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆဲလ်တွေအများအပြားကာကွယ်တားဆီးဖို့လုံလောက်သောဖြစ်မည်အကြောင်းညွှန်ပြကြဘူး။ ထို့အပွငျအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆဲလ်တွေအပြည့်အဝမိခင်အပြုအမူတွေကိုဖော်ပြသင်ယူသောအမျိုးသမီးအတွင်းရှင်သန်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီး hippocampus ၏ dentate gyrus အတွက်အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆဲလ်မိခင်များ၏အတွေ့အကြုံများကိုတုံ့ပြန်ထို့ကြောင့်သူတို့ကအသိအမှတ်မပြုခြင်းနှင့်သားစဉ်မြေးဆက်ကိုဂရုစိုက်ဖို့သင်ယူခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာအဖေဘက်ကယောက်ျား၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူ hippocampi တွင် neuron အသစ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ကြောင်းညွှန်ပြနေတဲ့ယခင်အစီရင်ခံစာနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြပြီးအမျိုးအနွယ်ကိုအသိအမှတ်ပြုမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ45.
သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့အဂရုမစိုက်တတ်ဖို့သင်ယူနေစဉ်အမျိုးသမီးဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ46,47။ နိဒါန်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတစ်ဦးစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်မှထိတွေ့မှုအရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ဂန္အေးစက်နေစဉ်အတွင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုဖိနှိပ်။ သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေ (ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဆင့်) သဘာဝကျကျအမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ရှောက်တာဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးဒါမှမဟုတ်မိခင်အကဲဆတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှတဆင့်သင်ယူဖိနှိပ်ဘူး14. ထို့အပြင်ဤသက်ရောက်မှုစိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးသမီးအတွက်သင်ယူမှု၏ဤအမျိုးအစားဟာသူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာ၌တစ်ချိန်ချိန်မိခင်ဖြစ်လာရန်လေ့လာသင်ယူခဲ့ဖိနှိပ်ပါဘူးသောအတိုင်းအတာအထိအတော်လေးအမြဲတမ်းရှိပါတယ်။48 မကြာသေးမီကလေ့လာမှု oxytocin အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်စေ system သို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်အာရုံ cortex အတွက်မိခင်အပြုအမူဖော်ပြမခံခဲ့ရကြောင်းမိခင်များအားဖြင့်ကြွက်ခွေးများ၏ပြန်လည်ရယူခြင်းတိုးမြှင့်ကြောင်းအစီရင်ခံ49. ဤအအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးကအမာရွတ်ထိတွေ့ pubescent အမျိုးသမီးသူတို့ oxytocin ICV ပေးလျှင်မိခင်အပြုအမူတွေကိုဖော်ပြတတ်ရန်သင်ယူမယ်လို့ဖြစ်နိုင်50 သို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်အာရုံ cortex အတွက်မိခင်ာင်းနေစဉ်အတွင်း49။ မိခင်အပြုအမူတွေအတွက်ထိုကဲ့သို့သောတိုးအားဖြင့် oxytocin မှထိတွေ့မှုမပါဘဲအလားတူ-ကုသအမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအခါ hippocampus ၏ dentate gyrus အတွက်အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အာရုံခံ၏ရှင်သန်မှုကိုတိုးမြှင့်သင့်တယ်။ အတူတကွဤအမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများမိဘများကသူတို့ငယ်ရွယ်များအတွက်ဂရုစိုက်ဖို့အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်သင်ယူရန်လာရာမှတဆင့်အလားအလာယန္တရားအဖြစ် neurogenesis ထောက်ပြ။ ဒါကြောင့်အမာရွတ်မော်ဒယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ဖို့အမျိုးသမီးတုံ့ပြန်မှုလေ့လာနေဘို့ဒါပေမယ့်လည်းမိခင်အပြုအမူနှင့် hippocampus အတွက် neurogenesis နှင့်အတူ၎င်း၏အလားအလာအပြန်အလှန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလေ့လာနေဘို့မသာအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးသမီးတွေသုံးဆယ်ကျော်ရာခိုင်နှုန်းကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မိမိတို့၏တစ်သက်တာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သို့မဟုတ်ချေမှုန်းရေးကိုတွေ့ကြုံခံစားနှင့်ဤအတွေ့အကြုံများအများအပြားအပျိုဖော်ဝင်နှင့်လူငယ်လူကြီးကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်51,52။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာအမျိုးသမီးတွေအတွက်စိတ်ကျရောဂါနှင့်သိမြင်မှုနှောင့်အယှက်များဖြစ်ပွားမှုများတွင်သိသိသာသာတိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်53။ ထို့အပွငျပြင်းထန်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူကိုအမျိုးသမီးတွေမကြာခဏဆိုသလို amygdala အတွက်လျှောက်လျော့နည်းခြင်းနှင့် hippocampal volumes ကိုအဖြစ်သင်ယူမှုလိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်နွယ်သော PTSD ထံမှခံရ54။ ထို့အပွငျ PTSD ခံစားနေရပြီးမိခင်များ၏သားတို့သည်မိမိတို့ဆင်းရဲသားကိုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဟောကိန်းအထောက်အကူပြုပေးသောစိတ်ထိခိုက်အတွေ့အကြုံများ, များအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာ55. လူသားမြားသညျတွင်ဤနှင့်အခြားလေ့လာမှုများနေသော်လည်းအမျိုးသမီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာများ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ဘို့အဘယ်သူမျှမထူထောင်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့ရှိ၏။ အဆိုပါလေ့လာမှုများအမျိုးသမီးအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာတစ်ခုအသုံးဝင်သောမော်ဒယ်အဖြစ်ကဒီမှာပစ္စုပ္ပန်အမာရွတ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါကကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ကျူးကျော်တွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့်တစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်မပါဘဲသောမိန်းမတို့အတွက်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အခြားစိတ်မမှန်အတွက်တိုးလာဘို့အကောင့်သောဦးနှောက်ယန္တရားအကြောင်းကိုအနည်းငယ်မျှသာသိသောကြောင့်, ငါတို့နိုင်လေ့လာမှုများအမျိုးအစားများအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်အရေးပါသောအလှူငွေဖြစ်ပါသည် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်ဤနေရာတွင်တင်ပြအဆိုပါဒေတာအမာရွတ်မှထိတွေ့မှုညွှန်ပြသိသိသာသာအမျိုးသမီးဦးနှောက်ထဲမှာ plasticity များအတွက်အကျိုးဆက်များသည့်သင်ယူမှုနှင့်မိခင်အမူအကျင့်များဖွံ့ဖြိုးရေး, လျော့နည်းစေသည်။ ကျနော်တို့ကနေပေါ်ထွန်းသောအမာရွတ်မော်ဒယ်နှင့်အချက်အလက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာခံစားခဲ့ကြရသည်နှင့်ယခု recove ဖို့သင်ယူရပါမည်သူကိုမိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးငယ်များအတွက်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်ဖွံ့ဖြိုးရန်အသုံးပြုနိုင်တင်ပြရန်r56,57.
ဤဆောင်းပါးတွင်ကိုးကားဖို့ကိုဘယ်လို: Shor, တီဂျေ et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Conspecific တက်ကြွတုံ့ပြန်မှု (အမာရွတ်): အဆိုပါအမျိုးသမီးဦးနှောက်ထဲမှာမိခင်သင်ယူနှင့်ပလပ်စတစ် Disrupts ကြောင်းလိင်စိတ်ဒဏ်ရာများ၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်။ သိပ္ပံ။ rep ။ 6, 18960; Doi: 10.1038 / srep18960 (2016) ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က, အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ဒေသတွင်းခန့်မှန်းချက်: ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုနှင့် Non-ဖက်လိင်အကြမ်းဖက်မှုပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများ။ http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf?ua=1 (2013) ။
Finkelhor, D. , Turner, HA, Shattuck, A. & Hamby, SL ကလေးများနှင့်လူငယ်တစ်ဦးအမျိုးသားပြန်လည်နမူနာများတွင်အကြမ်းဖက်မှု, ရာဇဝတ်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုထိတွေ့: update တစ်ခု. ဂျေအေအမ်အေကလေးအထူးကု 167, 614 (2013) ။
·3။
Cantor, D. , Fisher, ဒဗလျူ, Chibnaill, အက်စ်, Townsend ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလက်မခံနိုင်သောအပြုအမူဆိုင်ရာ AAU ကျောင်းဝင်းရာသီဥတုစစ်တမ်းအပေါ် R. , Lee, H. , Bruce, C. & Thomas, G. အစီရင်ခံစာ။ http://sexualassaulttaskforce.harvard.edu/files/taskforce/files/final_report_harvard_9.21.15။ (2015) ။
Briere, ဂျေ & ဂျော်ဒန်, အီး အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုများအတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုရလဒ်ကိုရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်သက်ရောက်မှုတွေဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက်မှု. Interpersonal အကြမ်းဖက်မှုဂျာနယ် 19, 1252-1276 (2004) ။
·5။
Shors, TJ, Olson, RL, Bates, ME, Selby, EA & Alderman, BL စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (MAP) သင်တန်း: လူသားတွေအတွက်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းစေပါတယ်တဲ့ neurogenesis-မှုတ်သွင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု. Neurobiol ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 115, 3-9 (2014) ။
·6။
ဂျော်ဒန်, အီး, ကမ့်ဘဲလ်, R. & Follingstad, D. အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေး: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏သက်ရောက်မှု. အမ်း။ ဗျာ Clin ။ Psychol. 6, 607-628 (2010) ။
·7။
Heim, C, Shugart, M. , Craighead, WE & Nemeroff, CB ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုများနှင့်လျစ်လျူရှု၏ Neurobiological နှင့်စိတ်ရောဂါအကျိုးဆက်များ. dev ။ Psychobiol ။ 52, 671-690 (2010) ။
· 8 ။
Kessler, RC အမျိုးသမီးများနှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏ကူးစက်ရောဂါ. ဂျေအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ disorders ။ 74, 5-13 (2003) ။
·9။
Dalla, C. & Shors, TJ ဂန္နှင့်အော်ပရေတာအေးစက်၏သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လိင်ကွဲပြားမှု. Physiol ။ ပြုမူနေ။ 97, 229-38 (2009) ။
· 10 ။
Wood က, GE & Shors, TJ စိတ်ဖိစီးမှုယောက်ျားအတွက်ဂန္ထဝင်အေးစက်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်, ဒါပေမယ့်သားအိမ်ဟော်မုန်း Active သက်ရောက်မှုမှတစ်ဆင့်အမျိုးသမီးအတွက်ဂန္ထဝင်အေးစက်ချို့ယွင်း. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 95, 4066-4071 (1998) ။
· 11 ။
Shor, တီဂျေ ယင်းသက်တမ်းကိုဖြတ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံနှင့်သင်ယူမှု. စိတ်ပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 57, 55-85, (2006) ။
· 12 ။
Maeng, LY & Shors, TJ အဆိုပါအလေးပေးအမျိုးသမီးဦးနှောက်: အ medial prefrontal cortex ၏ prelimbic အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုပေမယ် infralimbic မဟုတ်ဒေသစူးရှသောကဖိစီးမှုအပြီးသင်ယူမှုဖိနှိပ်. တပ်ဦး။ အာရုံကြော Circuits 7, 198 (2013) ။
· 13 ။
Bangasser, DA & Shors, TJ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်သင်ယူမှုအကြားလမ်းဆုံမှာအရေးပါသောဦးနှောက်ဆားကစ်. neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 34, 1223-1233 (2010) ။
· 14 ။
Leuner, ခ & Shors, TJ မိခင်စဉ်အတွင်းသင်ယူခြင်း: စိတ်ဖိစီးမှုမှဖြေခုခံ. Horm ။ ပြုမူနေ။ 50, 38-51 (2006) ။
· 15 ။
Curlik, DM, Difeo, G. အ & Shors, TJ လူကြီးပြင်ဆင်နေ: အသစ်ကဆဲလ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အပေါ်သို့ထောင်ပေါင်းများစွာအပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်း hippocampus တှငျမှေးဖှားနှင့်အများဆုံးအားထုတ်မှုသင်ယူမှုနှင့်အတူဆက်လက်ရှင်သန်နေကြတယ်. တပ်ဦး။ neuroscience. 8, 70 (2014) ။
· 16 ။
Shor, တီဂျေ အဆိုပါအရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက် neuron အသစ်တွေစေသည်နှင့်အားထုတ်မှုသင်ယူမှုအသကျရှငျကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်. Curr ။ dir ။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 23, 311-318 (2014) ။
· 17 ။
Leuner, B. et al ။ သင်ယူခြင်းဟာ hippocampus မှတ်ဉာဏ်အဘို့လိုအပ်ပါသည်အချိန်ထက် ကျော်လွန်. neuron အသစ်တွေ၏ရှင်သန်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ်. ဂျေ neuroscience ။ 24, 7477-7481 (2004) ။
· 18 ။
Sisti, HM, Glass, AL & Shors, TJ Neurogenesis နှင့်အကွာအကျိုးသက်ရောက်မှု: အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသင်ယူမှတ်ဉာဏ်နှင့် neuron အသစ်တွေ၏ရှင်သန်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ်. လေ့လာပါ။ Mem ကို. 14, 368-75 (2007) ။
· 19 ။
Curlik, DM, Maeng, LY, Agarwal, PR & Shors, TJ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးအရွယ်ရောက် hippocampus အသစ်ဆဲလ်ကျန်ရစ်သူ၏နံပါတ်တိုးပွါး. PLoS တစ်ခုမှာ 8, e55850 (2013) ။
· 20 ။
Seip, KM & Morrell, JI ခွေးများထိတွေ့ကညာအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်မိခင်လှုံ့ဆျောမှု၏အစွမ်းသတ္တိကိုသြဇာလွှမ်းမိုး. Physiol ။ ပြုမူနေ။ 95, 599-608 (2008) ။
· 21 ။
သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, အီး, Beylin, တစ် ဦး က, Tanapat, P. , ရိဗ်, A & Shors, TJ သင်ယူခြင်းဟာ hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ neurogenesis ပိုကောင်းစေပါတယ်. နတ်။ neuroscience ။ 2, 260-265 (1999) ။
· 22 ။
Anderson တို့, ML, Sisti, HM, Curlik, DM & Shors, TJ Associative သင်ယူမှုဟာအရေးပါတဲ့ကာလအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူ neurogenesis တိုးပွါး. အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 33, 175-81 (2011) ။
· 23 ။
Dalla, C တို့, Bangasser, DA, Edgecomb, C. & Shors, TJ Neurogenesis နှင့်သင်ယူမှု: ဝယ်ယူခြင်းနှင့် asymptotic စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်ကဆဲလ် hippocampus အတွက်ရှင်သန်မည်မျှကြိုတင်ခန့်မှန်း. Neurobiol ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 88, 143-8 (2007) ။
· 24 ။
အနောက်, MJ, Slomianka, အယ်လ် & Gundersen, HJ အဆိုပါ optical အစိတ်အပိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးကြွက် hippocampus ၏ subdivisions အတွက်အာရုံခံ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်၏ဘက်မလိုက် stereological ခန့်မှန်းချက်. Anat ။ ဖမ်းယူရေး။ 231, 482-97 (1991) ။
· 25 ။
Banasr, အမ်, Soumier, အေ, Hery, အမ်, Mocaër, အီး & Daszuta, အေ Agomelatine အသစ်တစ်ခုလက္ခဏာ, hippocampal neurogenesis အတွက်ဒေသဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို induces. Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 59, 1087-96 (2006) ။
· 26 ။
Blanchard, DC & Blanchard, RJ အဘယ်အရာကိုတိရိစ္ဆာန်ကျူးကျော်သုတေသနလူ့ကျူးကျော်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်မလား? Horm ။ ပြုမူနေ။ 44, 171-7 (2003) ။
· 27 ။
Geary Boal၊ ဂျေ၊ Hylton၊ RA၊ Gonzalez၊ SA & Hanlon, RT ကင်းမွန်၏လူမှုအပြုအမူအပေါ်လူအစုအဝေး၏ဆိုးကျိုးများ (နီညိုရောင် officinalis). Contemp ။ ထိပ်တန်း။ ဓာတ်ခွဲခန်း။ Animation ။ သိပ္ပံ။ 38, 49-55 (1999) ။
· 28 ။
Gobrogge, KL & Wang, ZW voles အတွက်ကျူးကျော်များ၏မျိုးရိုးဗီဇ. Adv ။ မျိုးရိုးဗီဇ။ 75, 121-50 (2011) ။
· 29 ။
Parga, ဂျေအေ & ဟင်နရီ, AR မိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်းအထီးကျူးကျော်: အမျိုးသမီးကြီးစိုးမျောက်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်အဘို့သက်သေအထောက်အထား? နံနက်။ ဂျေ Primatol ။ 70, 1187-90 (2008) ။
· 30 ။
Stockley, P. & ကမ့်ဘဲလ်, အေ အမျိုးသမီးယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ကျူးကျော်: interdisciplinary အမြင်များ. ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ B က 368, 20130073 (2013) ။
· 31 ။
Wood က, ဒဗလျူ & Eagly, AH အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏အပြုအမူများ၏ Cross-ယဉ်ကျေးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: လိင်ကွဲပြားမှုများ၏ဇစ်မြစ်များအတွက်ဂယက်ရိုက်. Psychol ။ နွားလား။ 128, 699-727 (2002) ။
· 32 ။
ယန်, CF & Shah က, မိုင် တစ်ကြိမ်မှာ module ကို, ဦးနှောက်ထဲမှာလိင်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ. အာရုံခံဆဲလျ 82, 261-78 (2014) ။
· 33 ။
ဒါဝင်, C. မျိုးစိတ်သစ်၏မူလအစနှင့်လူသား၏ဆင်းသက်လာ။ (နယူးအမေရိကန်စာကြည့်တိုက်, 1871) ။
Lindenfors, P. & Tullberg, BS ကျူးကျော်များ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်လိင်ပိုင်းရွေးချယ်ရေး၏အရေးပါမှု. Adv ။ မျိုးရိုးဗီဇ။ 75, 7-22 (2011) ။
· 35 ။
Darden, SK & Watts, အယ်လ် အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်သည်အခြားအမျိုးသမီးဆီသို့အမျိုးသမီးလူမှုရေးအပြုအမူပွောငျးလဲ. Biol ။ လက်တ. 8, 186-8 (2012) ။
· 36 ။
Romeo, RD, ရစ်ချတ်ဆန်, HN & Sisk, CL အပျိုဖော်ဝင်နှင့်အထီးဦးနှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရငျ့: တစ်အပြုအမူအလားအလာ recasting. neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 26, 381-91 (2002) ။
· 37 ။
လီဗန်, RM ပွားခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းစောင့်ရှောက်သူများမှပူးတွဲမှု၏ neurobiology. အလျင်အမြန်ဥပဒေဂျေ 63, 1553-1570 (2012) ။
· 38 ။
Wade, ဂျေ ဟော်မုန်း, ဦးနှောက်နှင့်အိမျမွှောအတွက်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေအကြားဆက်ဆံရေး. Horm ။ ပြုမူနေ။ 59, 637-44 (2011) ။
· 39 ။
Weathington, JM, Arnold, AR & Cooke, BM Juvenile လူမှုရေးလက်အောက်ခံအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာကဲ့သို့အပြုအမူတစ်ခုလိင်-တိကျတဲ့ပုံစံ induces. Horm ။ ပြုမူနေ။ 61, 91-9 (2012) ။
· 40 ။
Weathington, JM, Puhy, C, Hamki, အေ, Strahan, JA & Cooke, BM လူငယ်လူမှုရေးလက်အောက်ခံတုံ့ပြန်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု၏လိင် dimorphic ပုံစံများ. ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 256, 464-471 (2013) ။
· 41 ။
Romeo, RD & McEwen, BS စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်. အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1094, 202-214 (2006) ။
· 42 ။
Curlik, DM & Shors, TJ သင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကငျြ့: (MAP) လေ့ကျင့်ရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆိုပါ hippocampus အတွက် neurogenesis ၏လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်အခြားသောကောင်းကျိုးကိုတိုးမြှင့်သလား? Neuropharmacology 64, 506-514 (2013) ။
· 43 ။
Waddell, ဂျေ & Shors, TJ Neurogenesis, သင်ယူမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ. အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 3020-8 (2008) ။
· 44 ။
Dalla, C, Papachristos, EB, Whetstone, AS & Shors, TJ အမျိုးသမီးကြွက်များပိုမိုကောင်းမွန်အထီးကြွက်များထက်အမှတ်တရများခြေရာကောက်အကျိုးဆက်ဟာသူတို့ရဲ့ hippocampi တွင် neuron အသစ်တွေ၏ကြီးမြတ်သောအချိုးအစားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်သင်ယူ. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 106, 2927-2932 (2009) ။
· 45 ။
Mak, GK & Weiss, အက်စ် အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ CNS အာရုံခံကကမကထပြုခဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးအနွယ်၏အဖေဘက်ကအသိအမှတ်ပြုမှု. နတ်။ neuroscience ။ 13, 753-8 (2010) ။
· 46 ။
Kim က, P. et al ။ လူ့မိခင်ဦးနှောက်၏ပလတ်စတစ်: အစောပိုင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်းဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒအတွက် longitudinal အပြောင်းအလဲများ. ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 124, 695-700 (2010) ။
· 47 ။
Dulac, C. , O'Connell, LA & Wu, Z. မိခင်နှင့်ဖခင်၏အပြုအမူများ၏အာရုံကြောထိန်းချုပ်မှု. သိပ္ပံ 345, 765-70 (2014) ။
· 48 ။
Maeng, LY & Shors, TJ မိခင်တစ်ဦးနှင့်တစ်ပြိုင်နက်, အစဉ်မပြတ်မိခင်တစ်ဦး: မိခင်အတွေ့အကြုံကိုသင်ယူမှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်အမျိုးသမီးကာကွယ်ပေးသည်. ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 126, 137-141 (2012) ။
· 49 ။
Marlin, BJ, Miter, M. , D'Amour, JA, Chao, MV & Froemke, RC oxytocin cortical တားစီးထိန်းညှိခြင်းဖြင့်မိခင်အပြုအမူဖွ. သဘာဝ 520, 499-504 (2015) ။
· 50 ။
က de Jong, TR, Beiderbeck, DI & Neumann, ID oxytocin ၏ဆိုးကျိုးများ, estrous သံသရာနှင့်စိုးရိမ်စိတ်: အမျိုးသမီးကျူးကျော်စမ်းသပ်မှု (FIT) မှာကညာအမျိုးသမီးကျူးကျော်တိုင်းတာခြင်း. PLoS တစ်ခုမှာ 9, e91701 (2014) ။
· 51 ။
Garcia-Moreno, C၊ Heise, L. , Jansen, H. , Ellsberg, M. & Watts, C. အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု။ သိပ္ပံ,310(5752): 1282-1283 (2005) ။
· 52 ။
Tjaden, P. & Thoennes, N. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးပျံ့နှံ့များအတွက်တရားမျှတမှုစင်တာများဌာန, ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များ: အမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တမ်းဆန့်ကျင်အမျိုးသားရေးအကြမ်းဖက်မှုကနေတွေ့ရှိချက်. Natl ။ Inst ။ တရားမျှတရေးစင်တာများရောဂါထိန်းချုပ်ရေး Prev။ (1998) Doi: NCJ 172837 ။
Chen က LP သို့ et al ။ စိတ်ရောဂါမမှန်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်တစ်သက်တာရောဂါလက္ခဏာတွေကို: စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်. Mayo အဘိဓါန် Clin ။ proc ။ 85, 618-29 (2010) ။
· 54 ။
Weniger, G. အ, Lang, C တို့, Sachsse, U. & Irle, အီး Amygdala နှင့် dissociative မမှန်နှင့်အတူငယ်စဉ်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအတွက် hippocampal volumes ကိုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု. Acta Psychiatric ။ Scand ။ 118, 281-90 (2008) ။
· 55 ။
Chemtob, CM, Gudiño, OG & Laraque, D. ကလေးအထူးကုမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက် posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်စိတ်ကျရောဂါ Maternal: စိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များမှကလေးကထိတွေ့မှု၏ကလေးသည်မတရားသဖွငျ့နှင့်ကြိမ်နှုန်းတွေနဲ့အသင်းအဖွဲ့. ဂျေအေအမ်အေကလေး. 167, 1011-8 (2013) ။
· 56 ။
Shor, တီဂျေ ဦးနှောက်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်. မှတ်ဉာဏ်လမ်းသွားဆင်းတစ်ဦးကခရီးစဉ်. ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ ခ Biol ။ သိပ္ပံ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် (2016) ။
· 57 ။
Alderman, BL, Olson, RL, Brush, CJ & Shors, TJ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (MAP) သင်တန်း: ညှိဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်နေချိန်တွင်ပေါင်းစပ်ပြီးတရားအားထုတ်ခြင်းနှင့်အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းစိတ်ကျရောဂါနှင့်မွေးမြူရေးလျော့ကျစေပါတယ်. Translational စိတ်ရောဂါကုသမှု, စာနယ်ဇင်းများတွင် (2016) ။
KT ရန်နှင့်: (IRACDA နယူးဂျာစီပြည်နယ် / New York ကသုတေသနနှင့်ပညာရေးအတွက်သိပ္ပံမိတ်ဖက်များအတွက် NIH) TJS မှ Schizophrenia နှင့်စီးပွားပျက်ကပ်အပေါ်သုတေသနများအတွက်အပြုအမူဦးနှောက်ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ (NARSAD) မှတစ်ဦးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုတေသန Award ဆုနှင့်တစ်ဦး Inspiration ဆုကထောက်ခံ HC နှင့် DD မှ Dorthy နှင့်ဒါဝိဒ် Cooper က Fellowship ။
1. အမူအကျင့်များနှင့်စနစ်များအာရုံကြောသိပ္ပံ, စိတ်ပညာဌာန, Collaborative အာရုံကြောသိပ္ပံ, Rutgers တက္ကသိုလ်စင်တာ။
Tracey ဂျေ Shors ဏ
o, Krishna ဟိန္ဒူTobόn
o, Gina DiFeo
o Demetrius အမ် Durham
o & ဟန်ရန်အမ်ချန်
TJS, ထိုစမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းသူတို့ကိုကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်အဓိကလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်စာသားကိုရေးသားခဲ့သည်။ KT, GD, DD နှင့် HC, ဒီဇိုင်းလှူဒါန်းခဲ့စမ်းသပ်ချက်ကောက်ယူနှင့်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ HC ကိန်းဂဏန်းများ 1-5 ပြင်ဆင်ကြ၏။ အားလုံးစာရေးဆရာများလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြန်လည်သုံးသပ်။
စာပေးစာယူမှ Tracey ဂျေ Shor.